စွဲ၏မက်လုံးပေး sensitization သီအိုရီ: အချို့သောလက်ရှိပြissuesနာများ (2008) - သင့် ဦး နှောက် On Porn
စွဲလမ်းမှု၏မက်လုံးပေးာင်းသီအိုရီ: အချို့သောလက်ရှိပြဿနာများကို (2008)
တယ်ရီအီးရော်ဘင်ဆင် * နှင့် Kent ကို C Berridge
ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ။ 2008 အောက်တိုဘာလ 12; 363 (1507): 3137-3146 ။
2008 ဇူလိုင်လ 18 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1098 / rstb.2008.0093 ။
အပြည့်အဝလေ့လာမှု - စွဲလမ်းမှု၏ဆွဲဆောင်အားကောင်းသည့်သီအိုရီ - အချို့သောလက်ရှိပြissuesနာများ
မူပိုင်ခွင့်© 2008 အဆိုပါ Royal Society
စိတ်ပညာဌာန (Biopsychology အစီအစဉ်), မစ်ရှီဂန်, အရှေ့ခန်းမ, 530 ဘုရားကျောင်းလမ်း, အမ်း Arbore, MI 48109, အမေရိကန်နိုင်ငံ၏တက္ကသိုလ်
* စာပေးစာယူဘို့စာရေးသူနှင့်လိပ်စာ: Biopsychology အစီအစဉ်, စိတ်ပညာဌာန, မစ်ရှီဂန်တက္ကသိုလ်, အရှေ့ခန်းမ, 525 အရှေ့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း, အမ်း Arbore, MI 48109-1109, အမေရိကန်နိုင်ငံ (Email: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
ကျနော်တို့စွဲ၏မက်လုံးပေးာင်းသီအိုရီ၏အကျဉ်းခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကိုတင်ပြ။ ဒီအစွဲအဓိကအားလှုံ့ဆော်မှု-ဆက်စပ်ဆုချဖို့မက်လုံးပေး salience attribute သောဦးနှောက် mesocorticolimbic စနစ်များအတွက်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ာင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကြောင်း posits ။ hypersensitive ပြန်ဆိုခဲ့လျှင်ဤစနစ်များကိုမူးယစ်ဆေးများအတွက်ရောဂါဗေဒမက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှု ( 'လို') ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ မက်လုံးပေးထိခိုက်စေစွဲလမ်းအတွက်သင်ယူမှု၏အခန်းကဏ္ဍကိုကဘာလဲဆိုတာကျနော်တို့အပါအဝင်အချို့သောလက်ရှိမေးခွန်းများကိုဖြေရှင်း? မက်လုံးပေးာင်းလူ့စွဲများတွင်ဖြစ်ပေါ်ပါသလား? ာင်းနဲ့ဆက်စပ်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်စွဲလမ်းကဲ့သို့အပြုအမူ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလား? တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များကို အသုံးပြု. စွဲရောဂါလက္ခဏာပုံစံဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကဘာလဲ? နှင့်အညီ, နောက်ဆုံးတော့စွဲအတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေအပျော်အပါးသို့မဟုတ်ရုပ်သိမ်းများ၏အခန်းကဏ္ဍဘာတွေလုပ်နေလဲ?
keywords: sensitive က dopamine, အလေ့အထများ, ကင်း, စိတ်ကြွဆေး, လှုံ့ဆျောမှု
အချို့သောဘဝများ၌လူအများစုသည်စွဲလမ်းစေနိုင်သောမူးယစ်ဆေးဝါး (ဥပမာ - အရက်) ကိုကြိုးစားသည်။ သို့သော်အနည်းငယ်စွဲလမ်းဖြစ်လာသည်။ စွဲလမ်းမှုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပြုအမူများ၏ရောဂါဗေဒနှင့် compulsive ပုံစံကိုဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည်လူတစ် ဦး ၏အချိန်နှင့်အတွေးအခေါ်များကိုအလွန်အကျွံထည့်သွင်းထားခြင်းနှင့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိနေလင့်ကစားဆက်လက်ရှိနေသည် (Hasin et al ။ 2006) ။ စွဲသူများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲရန်ဆန္ဒရှိသည့်တိုင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချရန်သို့မဟုတ်အဆုံးသတ်ရန်အခက်တွေ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်စွဲသူများသည်ကြာရှည်စွာရှောင်ကြဉ်ပြီးနောက်မှပြန်လည်ထွက်ခွာခြင်းလက္ခဏာများပျောက်ကွယ်သွားပြီးနောက်၌ပင်ပြန်လည်ရှင်သန်ရန်အလွန်အားနည်းနေသည်။ ထို့ကြောင့်စွဲလမ်းမှုသုတေသနတွင်အဓိကမေးခွန်းတစ်ခုမှာဤလွယ်ကူစွာထိခိုက်လွယ်သောလူပုဂ္ဂိုလ်များတွင်စွဲလမ်းမှုသို့ကူးပြောင်းခြင်းအတွက်ဘာတာ ၀ န်ရှိသနည်း။
လွန်ခဲ့သည့်အနှစ် ၂၀ ကျော်အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများသည်စွဲလမ်းသူများ၏ ဦး နှောက်ကိုရှုပ်ထွေးပြီးအမြဲတစေနည်းလမ်းများဖြင့်ပြောင်းလဲစေသည်ဟုအသိအမှတ်ပြုမှုတိုးများလာသည်။ သည်းခံမှုသည်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်ရုတ်သိမ်းခြင်းနှင့်ဆက်နွှယ်သောအခြားအပြောင်းအလဲများထက်ပင်များပြားသည်။ ကျပန်းသို့မဟုတ်အပန်းဖြေမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှစွဲလမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့် ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများနှင့်အသွင်ကူးပြောင်းမှုအတွက်အထူးသဖြင့်လူတစ် ဦး ချင်းစီအားထိခိုက်လွယ်စေသည့်အင်္ဂါရပ်များကိုဖော်ထုတ်ရန်အရေးကြီးသည် (Robinson & Berridge 20; Nestler 1993; Hyman et al ။ 2001; Kalivas & O'Brien 2006) ။ ဦး နှောက်တွင်စွဲမြဲနေသောမူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအပြောင်းအလဲများသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များကိုပြောင်းလဲစေပြီးအမျိုးမျိုးသောလက္ခဏာများကိုစွဲလမ်းစေသည်။ ဤစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှု၏အရေးအကြီးဆုံးအရာမှာမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်စပ်သောလှုံ့ဆော်မှုများ (Robinson & Berridge 2008) ၏စိတ်အားထက်သန်မှု (သို့) စိတ်ခံစားမှုများဖြစ်သည်ဟူသောမူလအားဖြင့် ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေသောစွဲလမ်းမှု၏စိတ်အားထက်သန်မှုအာရုံခံစားမှုသီအိုရီတွင်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုခဲ့သည်။ Incentive sensitization သည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု (compulsive 'wanting) ဆီသို့အာရုံစူးစိုက်မှုအပြောင်းအလဲတစ်ခုဘက်လိုက်စေသည်။ အပြုအမူအပေါ်အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုအားနည်းခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါစိတ်အားထက်သန်မှုသည်စွဲလမ်းမှု၏အဓိကလက္ခဏာများ (Robinson & Berridge 1993, 1993, 1993) တွင်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်သည်။ မက်လုံးပေးအာရုံကိုလွန်ခဲ့သော ၁၅ နှစ်ကသိသိသာသာစိတ် ၀ င်စားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှုထောင့်ကိုအသစ်တဖန်ပြုပြင်ခြင်းသည်ကျိုးကြောင်းညီညွတ်သည်။ ဤနေရာတွင်စွဲလမ်းမှုအပေါ်ဤအမြင်၏အကျဉ်းချုပ်ကိုဖော်ပြပြီးလက်ရှိပြoverနာများကိုတင်ပြသည်။
2 ။ WHAT ကိုမက်လုံးပေးအထိခိုက်မခံသီအိုရီဖြစ်ပြီးဘာသင်ယူ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဘာလဲ
စွဲလမ်းမှုဖြစ်စေသည့်တစ် ဦး ချင်းအနေနှင့်အထူးသဖြင့်အခြေအနေများတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်လှုံ့ဆော်မှုကိုလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေသော ဦး နှောက်ဆဲလ်များနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်များကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည့်စွဲလမ်းစေနိုင်သောမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့ခြင်းသည်စိတ်အားတက်ကြွစေသည့်စိတ်စွဲလမ်းမှု၏စွဲလမ်းမှု (Robinson & Berridge 1993) ၏အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ လှုံ့ဆော်သောအပြုအမူတွင်ပါ ၀ င်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်။ ဤ 'neuroadaptations' ၏သဘောသဘာဝအရဤ ဦး နှောက်ဆားကစ်များသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောမက်လုံးမက်မောမှုကိုသိသာထင်ရှားစေသည့်နည်းဖြင့်ဤ ဦး နှောက်ပတ်လမ်းများကိုအလွန်အမင်းအာရုံမခံစားနိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
မက်လုံးပေးအကဲဆတ်ခြင်းဇွဲကပင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏ပြတ်တောက်ပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းနောက်ဆုံးဆေးဝါးများရောဂါဗေဒမက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှု (လိုသော) စေသည်။ Sensitized မက်လုံးပေး salience အခြေအနေများအပေါ် မူတည်. သို့မဟုတ် (သတိတဏှာကဲ့သို့) ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖြစ်စဉ်များ (လိုသောသတိလစ်ကဲ့သို့) သွယ်ဝိုက်ဖြစ်စေမှတဆင့်အပြုအမူ၌ထငျရှားရှိနိုင်ပါသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့စွဲအတွက်အထူးသဖြင့်မူးယစ်ဆေးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်တိကျတဲ့နှင့်သင့်လျော်သောပစ်မှတ်ကိုပုံမှန်အားဖြင့်တိုက်ရိုက်လှုံ့ဆျောမှုဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှုယန္တရားများနှင့်အတူမက်လုံးပေး salience ယန္တရားများအကြားတစ်ဦးအပြန်အလှန်အားဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသည်။
သင်ယူခြင်းသည်အလိုဆန္ဒ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖော်ပြသည်။ သို့သော်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲရန်ရောဂါဗေဒကိုလှုံ့ဆော်ရန်အတွက်လေ့လာသင်ယူခြင်းသည်လုံလောက်မှုမရှိကြောင်းသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကငြင်းခုံမှုသည် Pavlovian ၏အခြေပြုသည့်မက်လုံးပေးသောလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စဉ်များကိုဆိုလိုသည် (ဥပမာမက်လုံးပေးခြင်းဆိုင်ရာအာရုံစူးစိုက်မှု) ကိုဖျန်ဖြေပေးသော ဦး နှောက်ပတ်လမ်းများကိုအာရုံပြုခြင်းမှရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသည်ပေါ်ပေါက်လာသည်။ သို့ရာတွင်၊ အထူးပြုနေရာများ (သို့) အချိန်များတွင် (အခြားသူများမဟုတ်ပါ) အပြုအမူတွင်အာရုံကြောထိခိုက်မှုကိုဖော်ပြသည့်အပြုသဘောဆောင်သောလေ့လာသင်ယူမှုဖြစ်စဉ်များသည်မက်လုံးများပေးခြင်း၊ ထို့ကြောင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာအသိစိတ်ကိုမကြာခဏမူးယစ်ဆေးဝါးများယခင်ကတွေ့ကြုံခဲ့သည့်အခြေအနေများတွင်သာဖော်ပြလေ့ရှိသည် (Stewart & Vezina 1991; Anagnostaras & Robinson 1996; Robinson et al ။ 1998) နှင့် 'အခါသမယခြင်း' အမျိုးအစား၏လုပ်ဆောင်မှုကိုထင်ဟပ်စေနိုင်သည် ယန္တရား (Anagnostaras et al ။ 2002) ၏။ သင်ယူခြင်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားပေးမှုနှင့်နာကျင်မှုကဲ့သို့သောဆက်စပ်မှုမရှိသောလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စဉ်များ၏ဖော်ပြချက်ကိုမည်သို့မည်ပုံထိန်းညှိသည်နှင့်ဆင်တူသည်ကိုအထက်မှအောက်သို့ပုံစံဖြင့်အခြေခံ sensitization ဖြစ်စဉ်များပေါ်တွင်အလွှာများအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်သည်။ အထိခိုက်မခံခြင်းဟူသောအသုံးအနှုနျးကိုအကဉျြးကဉျြးထိန်းချုပ်ခွငျးသညျဆေးစွဲသူမြားသညျဆေးဝါးနှငျ့ပတျသကျသောအခကျအခဲမြားတှငျအဘယျကွောငျ့အဘယျကွောငျ့မူးယစ်ဆေးဝါးများကို“ အလိုရှိသည်” ကိုဖော်ပြသည့်အပိုဆောင်းယန္တရားတစ်ခုဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးပစ်မှတ်များကိုလိုချင်ခြင်း၏ဆက်စပ်မှုထက် ကျော်လွန်၍ ဖြန့်ဖြူးခြင်းအားဖြင့်တိ့ုသည်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်လူသားများတွင်အစားအစာ၊ လိင်၊ လောင်းကစားစသည်ဖြင့်အခြားပစ်မှတ်များသို့ပျံ့နှံ့နိုင်သည် (Mitchell & Stewart 1990; Fiorino & Phillips 1999a) ခ; တေလာ & Horger 1999; Nocjar & Panksepp 2002) ။ ဥပမာအားဖြင့်အချို့သောလူနာများတွင် dopaminergic ဆေးများဖြင့်ကုသခြင်းသည် dopamine dysregulation syndrome (DDS) ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကြောင့်သာမကတစ်ခါတစ်ရံတွင်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်း၊ hypersexuality၊ ရှုပ်ထွေးသောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာပုံစံ (Evans et al ။ 2006, p ။ 852) ၏
(က) အခွင့်အရေးာင်း: ရုံသင်ယူခြင်းထက်ပို
ဒါဟာ '' သင်ယူမှုရောဂါ '(Hyman 2005) အဖြစ်စွဲရည်ညွှန်းဖို့ရေပန်းစားဖြစ်လာသည်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကဒီထားသောစာပိုဒ်တိုများအဖြစ်မှန် fit မှကျဉ်းစေခြင်းငှါထင်ပါတယ်။ သင်ယူတစ်ဦးတည်းသာထိုလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်ဖြစ်ကောင်းမဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ရောဂါဗေဒလိုက်စားဆုံးစေတယ်သောတစ်ခုဖြစ်သည်။
သြဇာအရှိဆုံး 'လေ့လာသင်ယူမှုယူဆချက်' သည်မူးယစ်ဆေးဝါးများသည်အားကောင်းသော 'အလိုအလျောက်' လှုံ့ဆော်မှု - တုန့်ပြန်မှု (S-R) အလေ့အထများကိုလေ့လာခြင်းကိုတိုးမြှင့်သည်ဟုအကြံပြုသည်။ ထို့နောက်သူတို့၏သဘာဝအလျောက် S-R အလေ့အထများသည်အပြုအမူအားမဖြစ်မနေအပ်နှင်းသည်ဟုယူဆရသည် (Tiffany 1990) ; Berke & Hyman 2000; Everitt et al 2001; ။ Hyman et al 2006) ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ လေ့လာမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုတည်းအပေါ်တွင်မည်သည့်ဆေးဝါး၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမဆိုအပိုဆောင်းစိတ်ခွန်အားနိုးဖွယ်အစိတ်အပိုင်းများပါ ၀ င်ခြင်းမရှိခြင်းနှင့် S-R အလေ့အထများကိုစိတ်ခွန်အားနိုးစေသောအချက်များအားဖြင့်ပြုပြင်မွမ်းမံထားခြင်းမရှိပါက၊ ။ အလိုအလျောက် S-R အလေ့အထများသည်အလွန်ကောင်းစွာလေ့လာသင်ယူထားခြင်းကြောင့်သာတွန်းအားဖြစ်လာသည်လား။ ကျနော်တို့မှာသံသယတွေရှိတယ်။ ခိုင်ခံ့သော S-R အလေ့အထများသည်မဖြစ်မနေလိုက်နာရန်မလွယ်ကူပါ။ ဥပမာအားဖြင့်ဖိနပ်ချည်ခြင်း၊ သွားတိုက်ခြင်းစသည်တို့ကိုလူအများစုကအကြိမ် ၁၀၀၀၀ ကျော်ပြုလုပ်ပြီးနောက်၌ပင်မအောင်မြင်ပါ။ မူးယစ်ဆေးဝါးမရှိသောမူးယစ်ဆေးစွဲသူတစ် ဦး သည်နေ့ကိုရှုပ်ထွေးပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်ရှုပ်ထွေးသောအပြုအမူများ၊ ဥပမာ၊ လိမ်လည်ခြင်း၊ ခိုးယူခြင်းနှင့်ညှိနှိုင်းခြင်းကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးများဝယ်ယူရန်လှုံ့ဆော်ပုံရသည့်အကြောင်းအရင်းကိုရှင်းပြရန်လိုအပ်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများသည်သူတို့လုပ်ရသည့်အရာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများရရန်သွားရမည့်နေရာကိုသွားကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအာရုံစူးစိုက်သော်လည်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အပြုအမူ S-R ကိုအလေ့အထများ evoking အားဖြင့်ရှင်းပြလို့မရဘူးမူးယစ်ဆေးဝါးများများအတွက်ရောဂါဗေဒလှုံ့ဆျောမှုပြသထားတယ်။ အမှန်မှာ၊ တိကျခိုင်မာစွာ S-R အလေ့အထသီအိုရီသည်မူးယစ်ဆေးဝါးမရရှိနိုင်သည့်နံနက်ယံ၌နိုးလာသောအခါမူးယစ်ဆေးဝါးများယခင်ကအသုံးပြုခဲ့သည့်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတိုင်းအတိအကျလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမရရှိနိုင်ပါကစွဲလမ်းရန်လိုအပ်လိမ့်မည် လက်ရှိထိရောက်သို့မဟုတ်မ။ သို့သျောလညျးအစစ်အမှန်လောကရှိစွဲ S-R ကိုအလိုအလျောက်မဖြစ်။ , သူတို့ကအခြားဘာမျှမလျှင်, အတော်လေးကြံဖန်ဖြစ်ကြသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, S-R အလေ့အထများတစ်ချိန်ကရရှိသောမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းတွင်ပါဝင်သည့်အလိုအလျောက်အပြုအမူများနှင့်ထုံးတမ်းစဉ်လာများ (Tiffany 1990) ကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်ဟုလူတိုင်းကသဘောတူရမည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးဖြင့်ကုသမှုသည် S-R အလေ့အထများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုသည်။ တိရိစ္ဆာန်များ (Miles et al ။ 2003; Nelson & Killcross 2006)၊ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည့် dorsal striatum (Everitt et al ။ 2001; Porrino et al ။ 2007) ။ ပုံမှန်အားဖြင့်တိရိစ္ဆာန်များကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုစမ်းသပ်မှုများတွင်အလေ့အထများသည်အထူးသဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများထိုးသွင်းရန်အတွက်တုန့်ပြန်မှုတစ်ခုတည်း (ဥပမာလီဗာကိုနှိပ်ခြင်း) ကိုအလွန်နည်းပါးသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် S-R အလေ့အထများကိုလေ့လာခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုမည်သို့မြှင့်တင်ပေးသည်ကိုလေ့လာခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပြုအမူနှင့် ပတ်သက်၍ အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်သည်။
အဆိုပါမက်လုံးပေး sensitization သီအိုရီအာရုံခံ - သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကိုအာရုံစူးစိုက်မှုလှုံ့ဆျောမှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ဦး နှောက်အတွက်ဆက်စပ်အပြောင်းအလဲများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပေမယ့်ကျနော်တို့ကအခြား ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများကိုသိမြင်ရွေးချယ်မှုနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချအခြေခံ cortical ယန္တရားများအတွက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ကမောက်ကမဖြစ်မှုအပါအဝင်လည်းစွဲဖို့အရေးကြီးတယ်အထောက်အကူပြုကြောင်းအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည် ( ရော်ဘင်ဆင် & Berridge 2000, 2003) ။ လေ့လာမှုများစွာမှမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများနှင့်တိရိစ္ဆာန်များတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာရလဒ်များကိုမည်သို့အကဲဖြတ်ပုံနှင့်ပတ်သက်သည့် 'အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများ' ပြောင်းလဲမှုများ (Jentsch & Taylor 1999; Rogers & Robbins 2001; Bechara et al 2002; Schoenbaum & Shaham 2008) ။ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုအားနည်းခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့် ပတ်သက်၍ မှားယွင်းစွာရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ရာတွင်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သဘောတူသည်။
3 ။ အထိခိုက်မခံဆိုတာဘာလဲ?
အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံခံသိမှုသည် 'locomotor ၏လှုပ်ရှားမှု၏ sensitization' နှင့်တူညီနိုင်သည်ဟုစာပေများမှထင်မြင်ယူဆရန်လွယ်ကူသည်၊ သို့သော် locomotion သည်စိတ်ခံစားမှုလွန်ကဲသောဆေးဝါးများ၏ကွဲပြားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ) ။ ဤအခြေအနေတွင်စကားလုံး sensitization သည်ထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောမူးယစ်ဆေးဝါးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသာရည်ညွှန်းသည်ကိုသတိရရန်အရေးကြီးသည်။ မက်လုံးမက်မောမှုခံစားမှုသီအိုရီအတွက်အရေးကြီးသောအချက်မှာ 'locomotor sensitization' သို့မဟုတ် 'psychomotor sensitization' ပင်ဖြစ်သည်။ psychomotor activation mesotelencephalic dopamine systems (Wise & Bozarth 1986) အပါအဝင် ဦး နှောက်မက်လုံးပေးစနစ်များ၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုရောင်ပြန်ဟပ်ရန်စဉ်းစားသည်ဆိုပါကစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာခံစားချက်များကိုမကြာခဏသက်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတိုက်ဖျက်ရေးတွင်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာသက်သေအထောက်အထားအဖြစ် (သွယ်ဝိုက်သက်သေအထောက်အထားများ) အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့သော်ယင်းသည်မူးယစ်ဆေးစွဲလိုသောစိတ်ကိုအများဆုံးဖြစ်စေသော Locomotion circuitry မဟုတ်သောဤလှုံ့ဆျောမှုတိုက်ဖျက်ရေးတွင်အလွန်အမင်းအာရုံခံစားမှုဖြစ်သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုထပ်ခါတလဲလဲကြောင်းမက်လုံးပေးာင်းသီအိုရီ၏ဤအဓိက postulate လှုံ့ဆော်မှု-related ဆုချဖို့မက်လုံးပေး salience များ၏ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုတာဝန်ရှိသည်အာရုံကြောအလွှာ sensitizes အဲဒီမှာဘာအထောက်အထားပါသလဲ ပထမဦးစွာအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများတစ်အရေအတွက်ကြိုတင်ထိတွေ့မှုအမူအကျင့် Paradigm အမျိုးမျိုးသုံးပြီးတိုင်းတာမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏မက်လုံးပေးသက်ရောက်မှုပိုကောင်းစေပါတယ်။ ထို့ကြောင့် sensitive ကမူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပြုအမူများ၏နောက်ပိုင်းတွင်ဝယ်ယူနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်မူးယစ်ဆေးနှင့်တိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယား (လက်တ 1989 အပေါ် '' ချိုးအမှတ် '' တို့ကညွှန်ပြအဖြစ်မူးယစ်ဆေးအတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့လှုံ့ဆျောမှုနှင့်အတူတွဲနေရာများများအတွက်အေးစက်ဦးစားပေး; Vezina 2004; ရပ်ကွက် et al ။ 2006) ။
မက်လုံးမက်မောစေရန်ပိုမိုတိကျသောသက်သေသာဓကမှာဆေးဝါး - မူးယစ်ဆေးဝါးသွေးဆောင်မှုအပြောင်းအလဲများအားဆုလာဘ်နှင့်သက်ဆိုင်သောလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့်အပြောင်းအလဲများကိုပိုမိုအကဲဖြတ်ရန်နှင့်အလေ့အထလေ့လာမှုအပေါ် အခြေခံ၍ ဆုလာဘ် - ညွှန်ကြားသည့်အပြုအမူများတိုးမြှင့်ခြင်းအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာရှင်းလင်းချက်များကိုချန်လှပ်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးဆုတစ်ခုနှင့်တွဲဖက်ခြင်းအားဖြင့်မက်လုံးများပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်မက်လုံးများကိုအဓိကအားဖြင့်သုံးသော 'အေးဆေးတည်ငြိမ်သောလှုံ့ဆော်မှု' (CS) တို့သည်အခြေခံလက္ခဏာသုံးရပ်ရှိသည် (Berridge 2001; Cardinal et al ။ 2002) ။ (ဈ) ၎င်းတို့သည် 'လိုချင်သောအရာ' ဖြစ်လာစေရန် 'လှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာသံလိုက်' (Pavlovian အခြေပြုချဉ်းကပ်မှုအပြုအမူသို့မဟုတ် 'sign tracking' ဖြင့်တိုင်းတာနိုင်သည်) အနေဖြင့်ချဉ်းကပ်မှုကိုရယူနိုင်သည်။ (၂) ၎င်းတို့သည်ဆက်နွယ်မှုမရှိသောဆုလာဘ်များ (Pavlovian instrumental transfer မှတိုင်းတာနိုင်သည်) အားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော cue-ဖြစ်ပေါ်နေသောလုပ်ဆောင်မှုများအားတက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ (၃) ၎င်းတို့သည် ၄ ​​င်းတို့ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးတွင်အားဖြည့်သူများအဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာအသစ် (ရယူထားသောအားဖြည့်ခြင်းဖြင့်တိုင်းတာနိုင်သည်) အားပြန်လည်တုန့်ပြန်မှုအသစ်ကိုရရှိသည်။ ထို့ကြောင့်မက်လုံးအားထိရှလွယ်မှုအတွက်တိုက်ရိုက်သက်သေသာဓကအားဖြင့်အတိတ်ကမူးယစ်ဆေးဝါးကုသမှုသည်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာခံစားချက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသောမက်လုံးလှုံ့ဆော်မှု၏လက္ခဏာသုံးရပ်ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေကြောင်းပြသသည့်လေ့လာမှုများမှရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ Pavlovian ၏အခြေပြုချဉ်းကပ်မှုအပြုအမူ (Harmer & Phillips 1998); Pavlovian ဆာပလွှဲပြောင်း (Wyvell & Berridge 2001); နှင့်အားဖြည့် conditioned (Taylor & Horger 1999; Di Ciano 2007) ။
ဒါဟာသဘာဝကဆုလာဘ် (များသောအားဖြင့်အစားအစာသို့မဟုတ်ရေ) နဲ့မက်လုံးပေးာင်းတွဲဖက်မှု, မတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်အပေါ်အများဆုံးလေ့လာမှုများအတွက်မက်လုံးပေးစိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူ CS အပ်နှင်းရန်အသုံးပြုခဲ့ကွောငျး, သို့သော်, အသိအမှတ်ပြုရပါမည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုရဲ့တွဲဖက်မှုာင်းသူ့ဟာသူထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာကြိုတင်ာင်းတိုက်ရိုက်တိရိစ္ဆာန်စမ်းသပ်ချက်များတွင်မူးယစ်ဆေး-ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုများမက်လုံးပေးဂုဏ်သတ္တိများနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ရှိမရှိ၏မေးခွန်းကိုဖြေရှင်းရန်ခက်ခဲသည်။ တကယ်တော့သူကသာအလွန်မကြာသေးမီကဖော်ပြခဲ့သည်ခဲ့ပြီး (မည်သည့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှု၏ဆိုလိုသည်မှာလွတ်လပ်သော) တစ်ဦး Pavlovian ထုံးစံ၌မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူတွဲနေတဲ့ cue သူ့ဟာသူ (Uslaner et al ။ 2006) ဆီသို့ဦးတည်ချဉ်းကပ်ထုတ်ယူနိုင်ရန်လာနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုမှာ Di Ciano (2007) ကိုကင်းာင်းမက်လုံးပေးာင်းနှင့်ကိုက်ညီနေတဲ့ကိုကင်း-ဆက်စပ်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှု၏အခွအေနေအားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများလွယ်ကူချောမွေ့ခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိကြောင်း, ဒါကြောင့်, အရေးကြီးပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, DDS နှင့်အတူလူနာရောဂါဗေဒမူးယစ်ဆေးဝါးများချင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းမက်လုံးပေးာင်း (အီဗန် et al ။ 2006) ၏အယူအဆနှင့်ကိုက်ညီသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ဒီအများကြီးပိုစုံစမ်းစစ်ဆေးထိုက်သည့်ဧရိယာသည်။
မက်လုံးပေးအာရုံခံစားမှုဖြစ်ပေါ်ခြင်းရှိမရှိချဉ်းကပ်ရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ ဦး နှောက်ရှုထောင့်မှမေးခွန်းတစ်ခုကိုမေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ sensitization သည်ဆုလာဘ်ကိုလှုံ့ဆော်မှု၏မက်လုံးတန်ဖိုးကိုကုဒ်ပေးသော ဦး နှောက်စနစ်များတွင်အာရုံကြောဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးပွားစေပါသလား။ အများအပြားလေ့လာမှုများက (Tindell et al 2005; ။ Boileau et al 2006; ။ အီဗန် et al 2006 ။ Tindell et al) ။ ဥပမာအားဖြင့်, ကြွက်များတွင် amphetamine sensitization တစ်ဆုလာဘ် CS (Tindell et al ။ 2005) ၏မက်လုံး salience ကုဒ် mesolimbic အဆောက်အ ဦ များအတွက်အာရုံခံ၏တိကျသောပစ်ခတ်မှုပုံစံများတိုးပွားစေပါသည်။ လူသားများတွင်ထပ်ခါတလဲလဲအမ်ဖီတမင်းကုသမှုကိုနောက်ဆုံးဆေးဝါးကုသမှုခံယူပြီးနောက်တစ်နှစ်အကြာ (အမ်တီတမင်း - လှုံ့ဆော်ပေးသည့် dopamine 'ကိုထုတ်လွှတ်ခြင်း' ကိုပိုမိုထိရောက်စေရန်အစီရင်ခံသည်။ လူနာများတွင် dopamine ထုတ်လွှတ်မှုကိုလည်းအသိအမှတ်ပြုသည်) DDS (အီဗန် et al ။ 2006) နှင့်အတူ။ နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအချိန်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးမှထုတ်လုပ်သော ဦး နှောက်တွင်မည်သည့်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်လာသည်ကိုတိတိကျကျမသေချာလျှင်ပင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုကိုအခြေခံသည်နှင့်အမျှအထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအထောက်အထားများကထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်သက်ဆိုင်သည့်အပြုအမူများကိုပြောင်းလဲစေသည်ဟုဖော်ပြသည်။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းလမ်းညွှန်များတွင်ဖြစ်စဉ်များနှင့် ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများသည်စာတမ်းအတွက်သိသာထင်ရှားသောသက်သေအထောက်အထားဖြစ်သည်။
4 ။ လူသားတွေအတွက်အထိခိုက်မခံပေါ်ပေါက်သလဲ
ကျနော်တို့၎င်း၏ပထမဆုံးဆယ်စုနှစ်ထဲမှာမက်လုံးပေးာင်းသီအိုရီအကြောင်းကိုမကြာခဏကြားသိတစ်ခုမှာဝေဖန်မှုများသညျလူသားတို့အပြုအမူသို့မဟုတ်အာရုံကြောာင်းပြခြင်းမရှိသက်သေအထောက်အထားရှိကွောငျးကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအများအပြားလေ့လာမှုများယခု (ကြှနျုပျတို့ Leyton 2007 အားဖြင့်ဘာသာရပ်၏စဉ်းစားဟန်ဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့စာဖတ်သူများကိုကြည့်ပါ) လူနှစ်ဦးစလုံးအမူအကျင့်များနှင့်အာရုံကြောာင်းသရုပ်ပြပါပြီ။ ဟုတ်ပါတယ်, ပင်အစောပိုင်းကကမက်လုံးပေး salience ဤများ၏ဆက်စပ်မှုကျယ်ပြန့်အသိအမှတ်ပြုမခံခဲ့ရသော်လည်းလူသားများ, psychostimulant မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏လီယံ-related psychotomimetic နှင့် stereotypy-inducing ( 'punding') သက်ရောက်မှုများထိခိုက်မခံတဲ့ပြအသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသည်။ ဒါဟာထိခိုက်မက်လုံးပေး salience-type အမျိုးအစားယန္တရား schizophrenia နဲ့လှုံ့ဆော် psychoses ၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုအထောက်အကူပြုဖို့အဆိုပြုပြီးပါပြီကြောင်း, ဒါကြောင့်, စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါသည် (Kapur et al ။ 2005) ။
အတိုချုပ်ပြောရရင်လူသားတွေရဲ့မက်လုံးမက်လုံးကိုအသိပေးခြင်းအတွက်သက်သေအထောက်အထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသားတွေမှာ amphetamine ကိုထပ်ခါတလဲလဲစီမံခန့်ခွဲမှုကအထူးသဖြင့်မြင့်မားသောဆေးများမှာအထူးသဖြင့်မြင့်မားတဲ့ဆေးများမှာ (မျက်လုံးမှိတ်တည့်တည့်တုံ့ပြန်မှုများ၊ 1996; ။ Boileau et al 1998) ။ မူးယစ်ဆေးစွဲသူများအနေဖြင့်လည်းမူးယစ်ဆေးဝါးစွဲသူများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲသူများအားတိုင်းတာသည့်အတိုင်းမျက်စိနှင့်စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်သည့်အတိုင်းချက်ချင်းနှင့်သွယ်ဝိုက်အဆင့်တွင်အမြင်အာရုံမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်စပ်သည့်အချက်များကိုအာရုံစိုက်သည်။ (Wiers & Stacy) 2006) ။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအာရုံခံအာရုံကြောဆိုင်ရာအထောက်အထားများကိုမကြာသေးမီကလည်းလူသားများတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ထပ်ခါတလဲလဲအမ်ဖီတမင်း၏ထပ်ခါတလဲလဲစီမံခန့်ခွဲမှုသည်လူတစ် ဦး အားမူးယစ်ဆေးဝါးစိန်ခေါ်မှုကိုနောက်တစ်နှစ်အကြာတွင်ပင်ခံရသောအခါ၌ပင်လူသားများတွင် dopamine ထုတ်လွှတ်မှုကိုအသိသာဖြစ်စေသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးများသည်လည်းတူညီသောဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများတွင် dopamine တုန့်ပြန်မှုကိုတုန့်ပြန်စေသည် (Boileau) et al ။ 2006; Childress et al ။ 2006 ကိုလည်းကြည့်ပါ။ စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာကောင်းတာက l-DOPA ကိုတူညီတဲ့ sensitized dopamine တုန့်ပြန်မှုက Parkinson ရဲ့လူနာတွေထဲမှာ DDS လို့ခေါ်တဲ့လူနာတွေထဲမှာတွေ့ရတတ်တယ် (Evans et al ။ 2007) ။ ဤလူနာများတွင် l-DOPA သည်အာရုံကြောကဲ့သို့ ventral striatum တွင်အထူးသဖြင့်မြင့်မားသော dopamine ထုတ်လွှတ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အပြုအမူအားဖြင့် DDS ရှိလူနာများသည် dopaminergic ဆေးများကိုအလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်းဖြင့်လောင်းကစားခြင်းနှင့်ဓါးခတ်ခြင်း (ရှုပ်ထွေးသောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာပုံစံတစ်ခု) အပါအ ၀ င်အခြားမလှုပ်ရှားမလှုပ်ရှားမှုများကိုပြသသည်။ စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းဆုံးမှာ dopamine ထုတ်လွှတ်မှုတိုးလာခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးလိုချင်မှုအဆင့်မြင့်လာခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်သော်လည်းဆေးဝါးအလွန်အကျွံသောက်သုံးသောလူနာများအနေဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းနှင့်မဆက်စပ်ပါ။ ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုအားလုံးသည်မက်လုံးများနှင့်ထိတွေ့မှုရှိပြီး၊ အခြားစွဲလမ်းမှုအမြင်များအားဖြင့်ရှင်းလင်းရန်ခက်ခဲသည်။
သို့သော်လက်ရှိစာပေများတွင်စွဲသူများ၏ ဦး နှောက် dopamine ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပconflictိပက္ခဖြစ်နေသောရလဒ်များပါ ၀ င်သည်ကိုအသိအမှတ်ပြုရမည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ detoxified ကိုကာကိုလာစွဲသူများသည်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် sensitized တိုးများခြင်းထက် evoked dopamine ထုတ်လွှတ်မှုလျော့ကျခြင်းကိုအမှန်တကယ်ပြသကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည် (Volkow et al ။ 1997; Martinez et al ။ 2007) ။ သို့သော်ဤအစီရင်ခံစာများကိုသတိဖြင့်ဘာသာပြန်ရန်လိုအပ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပြောင်းလဲမှုများစွာသည်ရှုပ်ထွေးသောနည်းလမ်းများဖြင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်နေရာသို့မဟုတ်အချိန်တွင်ထုတ်ဖော်ခြင်းရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်, Leyton (2007) ကဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း, အခြေအနေတွင်၏အခန်းကဏ္generalကိုယေဘုယျအားဖြင့် sensitization ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျး Gating အတွက်ထို့ကြောင့် dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက် sensitized တိုး၏အရေးပါသည်။ တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအရ sensitization ၏အသုံးအနှုနျးအားမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုအုပ်ချုပ်သည့်အခြေအနေ (Robinson et al ။ 1998) ကအားကောင်းစွာပြုပြင်သည်၊ လူသားများသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများ (Leyton 2007) ကို ပို၍ ပင်အထိခိုက်မခံနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်တိရိစ္ဆာန်များသည်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုတစ်ခါမှမကြုံဖူးသည့်အခြေအနေတွင်စမ်းသပ်ခြင်းခံရလျှင်သိမ်သိမ်သိမ်ငယ်မှုနှင့်တိုးမြှင့်သော dopamine ထုတ်လွှတ်မှုသည်ပုံမှန်အားဖြင့်မထင်ရှားပါ (Fontana et al ။ 1993; Anagnostaras & Robinson 1996; Duvauchelle et al ။ 2000) ။ ထို့ကြောင့်တိရိစ္ဆာန်စာပေအပေါ် အခြေခံ၍ လူ့မူးယစ်ဆေးစွဲသူများသည်မူးယစ်ဆေးဝါး 'စိန်ခေါ်မှု' (ဥပမာ၊ စကင်နာ) ကိုပေးသောပတ်ဝန်းကျင်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသည့်အခြေအနေနှင့်သိသိသာသာကွဲပြားနေပါကအပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံခံမှုသို့မဟုတ်အာရုံခံနိုင်သည့် dopamine ထုတ်လွှတ်မှုကိုဖော်ပြရန်မမျှော်လင့်သင့်ပါ မတိုင်မီ။ မှတ်သားစရာမှာမှတ်သားစရာမှာမှတ်သားစရာမှာ dopamine လွှတ်ပေးခြင်းသည်ယခုအချိန်အထိလူသားများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည်နောက်ပိုင်းတွင်စမ်းသပ်မှုများတွင်အသုံးပြုသော sensitivity ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးကုသမှုပေးခြင်းဖြင့်အလားတူအခြေအနေများကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဂရုစိုက်ခဲ့သည် (scanner; Boileau et al ။ 2006) ။ ထို့ကြောင့်အနာဂတ်လေ့လာမှုများတွင်ဓာတ်ခွဲခန်းပတ်ဝန်းကျင်တွင်တွေ့မြင်ရသည့်အရာများသည်ဆေးစွဲသူများသည်ပုံမှန်အခြေအနေတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးများသောက်သုံးသောအခါမည်သို့ဖြစ်မည်ကိုထင်ဟပ်သည်ဟုမယူဆမီအခြေအနေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်လည်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုရပ်ဆိုင်းပြီးနောက်မကြာမီမှာပင် sensitization ကိုစစ်ဆေးရန်မဟုတ်ဘဲသည်းခံမှုလျော့ပါးသွားသည်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်လည်းအရေးကြီးသည်။ သည်းခံမှုသည် sensitization ၏ဖော်ပြချက်ကိုဖုံးကွယ်နိုင်သောကြောင့်နှင့် 'ပေါက်ဖွားသောအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း sensitization ကိုအကောင်းဆုံးဖော်ပြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ '(ရော်ဘင်ဆင် & Becker က 1986; Dalia et al 1998 ။ ) ။
ာင်းနှင့်အတူကိုက်ညီမှုပုံလူသားတွေအတွက်နောက်ထပ်တွေ့ရှိချက်ကိုကင်းစွဲပင်ကြာမြင့်စွာနေကြပြီး (။ ။ , Martinez et al2Volkow et al 1990) ပြီးနောက် striatal dopamine D2004 receptors ၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်ရှိသည်သတင်းပို့ကြသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒါက hypodopaminergic ပြည်နယ်ထက်တစ်ဦးထိခိုက်ပြည်နယ် (Volkow et al ။ 2004) အကြံပြုထားသည်။ သို့သျောလညျးကိုတဖန်, သတိထားဘို့ခိုင်ခိုင်လုံလုံရှိပါတယ်။ ။ ။ De Vries et al 2;; Edwards က et al D2 receptors Ujike et al (တိုးလာသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအထိခိုက်မခံခဲ့ကြသော်လည်းအဖြစ် 1990 ပထမဦးစွာကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပါအဝင်ကြွက်များတွင် psychostimulant ကုသမှု, တိုက်ရိုက်-သရုပ်ဆောင် D2002 agonists မှအမူအကျင့် supersensitivity ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ 2007) ။ ဒီကွာဟမှုများအတွက်အကြောင်းပြချက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး, ဒါပေမဲ့တဦးတည်းအလားအလာ resolution ကို dopamine D2 receptors နှစ်ခု interconvertible ဆှဖှေဲ့ပြည်နယ်များတတည်ရှိနိုင်သောစဉ်းစားခြင်းဖြင့်ထမြောက်: တစ်က high-ဆှဖှေဲ့ပြည်နယ်နှင့်တစ်ဦးအနိမ့်-ဆှဖှေဲ့ပြည်နယ်နှင့် dopamine က၎င်း၏အလုပ်လုပ်တဲ့သက်ရောက်မှုပြုပြင် သာ receptors (Seeman et al ။ 2005) အပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ D2 supersensitivity ထုတ်လုပ်ကြောင်းအတော်များများကကုသမှုလည်းကြွက်များတွင် striatal receptors အတွက်တိုးမြှင့်ဖြစ်ပေါ်စေပေမယ့်ပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်ပင်စုစုပေါင်း D2 binding လျှော့ပါဘူး (Seeman et al ။ 2005) ။ (Seeman et al ။ 2008, 2002) စိတ်ကြွဆေးအများဆုံး, ဒီမှာဆွေးနွေးမှုများအတွက်အရေးကြီးသောကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွေ့အကြုံ (Briand et al ။ 2007) အရေးကြီးတဲ့လည်းမရှိ, အတူ striatal receptors ၏နံပါတ်တစ်မြဲတိုးထုတ်လုပ်ရန်အစီရင်ခံခဲ့ကြ (ယူဆရထို့ကြောင့် receptors အတွက်အချိုးကျကျဆင်းခြင်းနှင့်) binding စုစုပေါင်း D2 အတွက်ပြောင်းလဲမှု။ အရှင်ဝေးသညျလူသားတို့အတွက် dopamine D2 receptors ၏အတွင်း Vivo လေ့လာမှုများ D2 အဲဒီ receptor ၏နည်းပါးခြင်းနှင့်မြင့်မားသောဆှဖှေဲ့ပြည်နယ်များအကြားခွဲခြားမှုမရကြဘူး, ဒါ receptors မှတိကျတဲ့ဖြစ်ကြောင်းအပြောင်းအလဲများကိုလက်လွတ်နှင့် dopamine function ကိုအကြောင်းအထင်မြင်မှားစေသောအထင်အမြင်ပေးနိုင်ကြောင်းအတှကျအသုံးပွု Ligands (Seeman et al ။ 2005) ။ ထို့ကွောငျ့အထူးစွဲတိုးလာသို့မဟုတ် D2 အဲဒီ receptor အချက်ပြလျှော့ချပြီနိဂုံးချုပ်မတိုင်မီလူသားတွေအတွက် receptors များကိုတွက်ချက်နိုင်မ ligands နှင့်အတူလေ့လာမှုများလုပ်ဆောင်ရန်အရေးကြီးပါသည်ဖြစ်လိမ့်မည်။
5 ။ တိရစ္ဆာန်များတွင် '' စွဲ-like '' အပြုအမူထုတ်လုပ်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများလည်းအထိခိုက်မခံထုတ်လုပ်သလဲ
စွဲလမ်းစေသောမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ပတ်သက်သောတိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများတွင်လူ့စွဲလမ်းမှုကိုတုပရန်မလိုသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်နည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ယခုသက်သေအထောက်အထားများအရတိရိစ္ဆာန်များတွင်စွဲလမ်းမှုလက္ခဏာများကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဆေးများအားအကန့်အသတ်ဖြင့်သာအသုံးပြုခြင်းသည်တိရစ္ဆာန်များကိုမိမိကိုယ်ကိုအုပ်ချုပ်သောဆေးများကိုခွင့်ပြုသည့်ရက်များစွာကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်ထိရောက်မှုမရှိကြောင်းပြသထားသည် (Wolffgramm & Heyne) ၁၉၉၅; Heyne & Wolffgramm 1995; Deroche-Gamonet et al ။ 1998), သို့မဟုတ်နာရီပေါင်းများစွာတိုးချဲ့ခြင်းဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုနေ့တိုင်းရရှိနိုင်သည် (Ahmed & Koob 2004) ။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရကြွက်အချို့သည်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းကဲ့သို့သောလက္ခဏာများ (Deroche-Gamonet et al ။ 1998) ကိုမတီထွင်မှီလပေါင်းများစွာသွေးကြောသွင်းအားဖြည့်ကိုကင်းကိုကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ မရရှိနိုင်ကြောင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးများရရှိရန်စိတ်အားထက်သန်မှုတိုးပွားစေခြင်း၊ အလားတူစွာ Ahmed & Koob (၁၉၉၈) မှကြွက်များကို ၆ ကြိမ်မြောက် IV ကိုကင်းကိုကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲခွင့်ပြုသည် (တိုးချဲ့လက်လှမ်းမီမှု)၊ သို့သော် ၁ ဒသမ ၁ (အကန့်အသတ်ဖြင့်ဝင်ရောက်ခြင်း) သည်စွဲလမ်းမှုကဲ့သို့သောအပြုအမူများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုဆိုသည်။ ယင်းတို့တွင်စားသုံးမှုပိုမိုများပြားလာခြင်းပါဝင်သည် (Ahmed & Koob 2004; Mantsch et al ။ 1998; Ferrario et al ။ 6)၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲရန်လှုံ့ဆော်မှုများတိုးမြှင့်ခြင်း (Paterson & Markou 1)၊ ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသောမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုဆက်လက်ရှာဖွေခြင်း (Vanderschuren & Everitt) 1; Pelloux et al ။ 1) နှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရန်ပိုမိုကြီးမားသော propensity (Ahmed က & Koob 1998; Ferrario et al 2004; ။ Knackstedt & Kalivas 2005) ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုအချို့ကိုဘိန်းဖြူတိုးချဲ့သုံးစွဲပြီးနောက်ဖော်ပြခဲ့သည် (Ahmed et al ။ 2003) ။
ကိုကင်းသုံးစွဲမှုကိုတိုးချဲ့ခြင်းသည်တိရိစ္ဆာန်များတွင် prefrontal cortex ကမောက်ကမဖြစ်မှုလက္ခဏာများကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးလူ့စွဲလမ်းသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက (Jentsch & Taylor 1999; Rogers et al ။ 1999) ။ ဥပမာအားဖြင့်, Briand et al ။ (2008) မကြာသေးမီကတိုးချဲ့ပေမယ့်ကန့်သတ်ပေးထားပေးထားကြွက်များတွင် medial prefrontal cortex အတွက် dopamine D2 (မ D1) အဲဒီ receptor mRNA နှင့်ပရိုတိန်းအတွက်မြဲကျဆင်းခြင်းတွေ့ရှိခဲ့ persistent လိုငွေပြမှုများနှင့်အတူလိုက်ပါ လျော့နည်းသွားသိမြင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏ညွှန်ပြခဲ့ကြသောစဉ်ဆက်မပြတ် - အာရုံကိုအလုပ်အပေါ်။ ဂျော့ခ်ျ et al ။ (0.4) ကတိုး (တိုးပွားသော်လည်းမကန့်သတ်ထားပါ) ကိုကင်းသုံးစွဲနိုင်မှု (ဆေးထိုးနှုန်း ၀.၅ မီလီဂရမ်ကီလိုဂရမ် - ၁) သည် ဦး နှောက်ဒေသရှိဆယ်လူလာပြောင်းလဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သောတိုကျရိုကျအကှေးအတှကျလိုအပျသညျ့မှတ်ဉာဏ်လုပျငနျးကိုလိုအပျကွောငျးဖျောပွထားသညျ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပိုမိုမြင့်မားဆေးများ (ဆေးထိုးနှုန်း 1 မီလီဂရမ်ကီလိုဂရမ် -2007) ကိုအသုံးပြု။ Calu et al ။ (0.5) 1 hd-0.75 အဘို့အကိုကိုကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲရန်ကိုခွင့်ပြုကြွက်ပြောင်းပြန်သင်ယူမှုအတွက်မြဲလိုငွေပြမှုပြသခဲ့သည်။
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, မူးယစ်ဆေးဝါးမှဝင်ရောက်ခွင့်တိုးချဲ့စွဲတူသောရောဂါလက္ခဏာများနှင့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်သိမြင်မှုလိုငွေပြမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ကြောင်းစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသက်သေအထောက်အထားယခုလည်းမရှိ။ ။ Ahmed က et al 2004;; ။ ဒီတိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ကန့်သတ် access ကိုထက် သာ. ကြီးမြတ်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်နှင့်စွဲတူသောအပြုအမူ (Mantsch et al တာဝန်ရှိသည်ဦးနှောက်ထဲမှာ သာ. ကြီးမြတ်သက်ဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုထုတ်လုပ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ 2005 ယူဆရသည်။ Ferrario et al 2005; Briand et al ။ 2008) ။
အဆိုပါမက်လုံးပေးာင်းသီအိုရီဦးနှောက်အတွက်အရေးနှင့်ဆက်စပ်သောအပြောင်းအလဲများပေါ့ပေါ့ထံမှ compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှအကူးအပြောင်းမှုအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်ကြောင်း posits ။ ထို့ကြောင့်, တိုးချဲ့ access ကိုလုပျထုံးလုပျနညျးဒီအကူးအပြောင်းအတွက်အကောင်းဆုံးမော်ဒယ်များပေးပေးထားသောကျနော်တို့တိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုလည်းကြံ့ခိုင်အပြုအမူအာရုံခံစားမှုနှင့်ဦးနှောက်အတွက်ဆက်စပ်အပြောင်းအလဲများကိုထုတ်လုပ်သင့်ကြောင်းကြိုတင်ခန့်မှန်းလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်ဤအမှန်ပင်ကိစ္စတွင်ကြောင်းအကြံပြုအချို့သက်သေအထောက်အထားများရှိသည်။ Ferrario et al ။ (2005) ခွင့်ပြုခဲ့ကြွက် (သုံးပတ်။ ခန့်များအတွက်6hd ကို-1) ကိုကင်းမှဝင်ရောက်ခွင့်တိုးချဲ့ပြီးတော့မူးယစ်ဆေးဝါးဖို့နောက်ဆုံးထိတွေ့ပြီးနောက်အကြာတွင်တစ်လာင်းစမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ ကိုကင်းမှဝင်ရောက်ခွင့်တိုးချဲ့ခဲ့ကွောငျးကြွက်ကန့်သတ် access ကို (1 hd ကို-1), နှင့်၎င်းတို့၏ဦးနှောက်ထဲမှာ သာ. ကြီးမြတ်အရေးနှင့်ဆက်စပ်သောအပြောင်းအလဲများပေးထားသောကြွက်ထက်ပိုအားကောင်းတဲ့ psychomotor ာင်းပြထဲမှာအလတ်စား spiny အာရုံခံအပေါ် dendritic ကျောရိုး၏သိပ်သည်းဆအတွက်အများကြီးပိုကြီးတဲ့တိုး နျူကလီးယပ် accumbens ၏အမာခံ။ အထူး accumbens core ကိုအတွက်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆအတွက်ထိုကဲ့သို့သောတိုးယခင်က psychomotor ာင်း (Li က et al ။ 2004) ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်ပြီ။
ဦး နှောက်အတွင်းအာရုံခံစားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအပြောင်းအလဲများသည်စွဲလမ်းမှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေပါကမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းကိုကြိုတင်သိရှိခြင်းဖြင့်ကြွက်များအားမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခွင့်ပေးသည့်အခါစွဲလမ်းမှုကဲ့သို့သောအပြုအမူများဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်မည်ဟုခန့်မှန်းနိုင်သည်။ ဤသည်မှာဖြစ်ပုံရသည်။ psychomotor sensitization ကိုဖြစ်ပေါ်စေသော amphetamine ကုသမှုနည်းလမ်းသည်နောက်ပိုင်းတွင်တိရိစ္ဆာန်များအားကိုကိုးအားကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲခွင့်ပြုသည့်အခါကိုကင်းစားသုံးမှုပိုမိုဆိုးရွားလာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့ရပြီ (Ferrario & Robinson 2007) ။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများဖြင့်ထပ်ခါတလဲလဲကုသမှုသည်မူးယစ်ဆေးဝါး၏နောက်ဆက်တွဲစိတ်ဓာတ်ကိုတိုးပွားစေပါသည် (Vezina 2004; Nordquist et al ။ 2007) ။ နှင့်ဆေးစွဲမှု၏လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သော S-R အလေ့အထများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုပင်လွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။ Killcross 2006; ။ Nordquist et al 2007) ။ ဤရွေ့ကားလေ့လာမှုများ sensitization အခြေခံအာရုံကြောအပြောင်းအလဲများကိုနောက်ဆက်တွဲစွဲကဲ့သို့အပြုအမူတွေကိုမြှင့်တင်ရန်လုံလောက်သောဖြစ်နိုင်သည်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
သို့သော်၊ မိမိကိုယ်ကိုအုပ်ချုပ်သောကိုကင်းမှတိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခြင်းသည်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ခြင်းရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်၍ စာပေတွင်ရှုပ်ထွေးမှုအချို့ရှိသည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။ အစီရင်ခံစာအနည်းငယ်ကကိုကင်းသုံးစွဲမှုကိုတိုးချဲ့ခြင်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုဆိုသည်။ သို့သော်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာအသုံးပြုခြင်းထက်ပိုမိုမြင့်မားသောအသိစိတ်ကင်းမဲ့မှုရှိသည် (Ahmed & Cador 2006; Knackstedt & Kalivas 2007) ။ ဘင် -Shahar et al ။ 2004) ။ သို့သော်ဤအဆုံးစွန်သောလေ့လာမှုများကမှားယွင်းသောအပြုအမူများကိုတိုင်းတာခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုပိုမိုပြင်းထန်လာစေသည့်အခြားအပြုအမူများ (ဥပမာ - မြင့်မားသောအဆင့်များတွင်ရွေ့လျားမှုနှင့်ယှဉ်ပြိုင်သည့်မော်တာကျပုံစံများအပါအ ၀ င်အရည်အသွေးအပြောင်းအလဲများပေါ်ပေါက်လာခြင်း) ကိုတိုင်းတာရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ဤလေ့လာမှုများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည် locomotor လုပ်ဆောင်မှုကိုသာတိုင်းတာသည့်အခါကန့်သတ်ခြင်း၏ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမတွေ့ရပါ။ (Ferrario et al ။ 2005) ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကိုကင်းကိုတိုးချဲ့သုံးစွဲခွင့်ကမူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဦး ခေါင်းလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းတိုင်းတာတဲ့အခါမှာကန့်သတ်သုံးစွဲမှုထက်ကိုကင်းကိုပိုမိုထိရောက်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်ကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံခံမှုဆိုင်ရာသုတေသနတွင်ရှေ့ဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်သည့် Segal (1975, p ။ 248) မှဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း 'အပြုအမူဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှု၏အစိတ်အပိုင်းများကိုသွင်ပြင်လက္ခဏာလိုအပ်သည်၊ ကြံ့ခိုင်မှုအားနည်းခြင်း (Segal 1975; Post & Rose 1976) နှင့် locomotor အပြုအမူကို psychomotor အညွှန်းကိန်းအဖြစ်တစ်ခုတည်းသောအသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့သော Locomotor အစီအမံများတစ်ခုတည်းကမကြာခဏရွေ့လျားမှုမှလွှမ်းမိုးသောအပြုအမူများမှ motor stereotypy နှင့်ကူးပြောင်းခြင်းကိုအထိခိုက်မခံပါ။ sensitization မှားကောက်ချက်ဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။
ဤကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်များတွင်အပျက်သဘောဆောင်သောရလဒ်များကိုအလွန်အမင်းအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခြင်းသည်ကွင်းဆင်းမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အပိုဆောင်းအချက်အလက်များမပါဘဲအပျက်သဘောဆောင်သောရလဒ်များကိုအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူရန်မဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရလဒ်ကောင်းတစ်ခုတွင်သာထိုကဲ့သို့သောရွေ့လျားခြင်းကဲ့သို့သောတစ်ခုတည်းသောအတိုင်းအတာသည်အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သည်။ Flagel & ရော်ဘင်ဆင် (၂၀၀၇) ကဤအချက်ကိုမကြာသေးမီကထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။ ပေးထားသောဆေးပမာဏအရကိုကင်း - သွေးဆောင်လှုပ်ရှားသည့်စက်ခေါင်းလှုပ်ရှားမှု (ဥပမာ - အကွာအဝေးခရီးသွားခြင်းသို့မဟုတ်ဖြတ်ကူးဖြတ်သန်းခြင်း) တွင်အုပ်စုလိုက်ကွဲပြားမှုမရှိနိုင်ကြောင်းပြသသည်။ ဤရွေ့ကားကိစ္စ၏ကျယ်ပြန့်ဆွေးနွေးမှုအတွက် Cromag et al (2007) နှင့် Flagel & ရော်ဘင်ဆင် (1999) တွင်ကြည့်ပါ) ရွေ့လျားမှုတစ်ခုချင်းစီ၏အလျင်) နှင့်အခြားအပြုအမူများ (ဥပမာအကြိမ်ရေနှင့် ဦး ခေါင်းလှုပ်ရှားမှုအရေအတွက်) ။ တိုးချဲ့လက်လှမ်းမှီပြီးနောက် sensitization ၏အနာဂတ်လေ့လာမှုများ sensitization ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ထင်ရှားပြခြင်းနှင့်တစ် ဦး ထက်ပိုသောတိုင်းတာနိုင်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းမှအကျိုးလိမ့်မယ်။
6 ။ စွဲဦးနှောက်ထဲမှာစမ်းသပ်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သူအပြောင်းအလဲများသက်ဆိုင်ရာပါသလား?
နောက်ထပ်အငြင်းပွားဖွယ်ရာကမူးယစ်ဆေးတစ်ခုစမ်းသပ်ပေးသောအခါလူ့စွဲဖို့သက်ဆိုင်ရာတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူများတွင်အပြောင်းအလဲများထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိစိုးရိမ်ပူပန်မှုများထက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိရစ္ဆာန်သည်။ ဤအကြောင်းကိုစဉ်းစားမှာ, အုပ်ချုပ်ရေး၏ mode ကိုထက်လူ့စွဲဖို့လက္ခဏာရလဒ်များ၏တူစဉ်းစားရန်ကိုပိုမိုအရေးကြီးသောဖြစ်နိုင်သည်။ ၏သင်တန်း, အရှိဆုံးသင့်လျော်သောမော်ဒယ်များသို့မဟုတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများလူ့စွဲရှိသူတို့အားအလွန်ဆင်တူ, အမူအကျင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ် neurobiological ရလဒ်များထုတ်လုပ်ရန်သောသူတို့ဖြစ်ကြသည်။ ထိုအထို့ကြောင့်မေးခွန်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဒီလုပျနိုငျသောရသနည်း
စမ်းသပ်သူများနှင့်ကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်သောဆေးများသည်အာရုံကြောဆိုင်ရာအာရုံခံမှုကိုထုတ်လုပ်သရွေ့သက်ဆိုင်ရာရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည်။ အမှန်စင်စစ်တ ဦး တည်းအနေဖြင့် ပို၍ ပင်အစွန်းရောက်သောအဆိုပြုချက်တစ်ခုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ခိုင်မာသည့်အသိသာထင်ရှားသည့်စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်သောမူးယစ်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည်စွဲလမ်းမှုကိုမိမိကိုယ်မိမိအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများထက်ပိုမိုထိရောက်စွာပုံစံပြုနိုင်သည်၊ ) ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အထက်တွင်ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အတိုင်းကန့်သတ်ထိန်းချုပ်မှုရှိသည့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိခြင်းသည်ပြင်းထန်သောအာရုံခံစားမှုသို့မဟုတ်စွဲခြင်းလက္ခဏာများကိုထုတ်လုပ်ရန်ပျက်ကွက်နိုင်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်စမ်းသပ်ဆေးဖြင့်ကုသသောဆေးများနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ် (Vezina 2004)၊ cue လိုချင်သူများအတွက်မက်လုံးပေးခြင်း (Robinson & Berridge 2000; Di Ciano 2007)၊ သိမြင်မှုချို့ယွင်းခြင်းနှင့်ပိုမိုအားကောင်းသည့် S ထုတ်လုပ်ရန်လုံလောက်သည်။ -R အလေ့အထများ (Miles et al ။ 2008; Nelson & Killcross 2003), ယင်းတို့အားလုံးသည်ဆေးစွဲခြင်းသို့ကူးပြောင်းရာတွင်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ ထို့အပြင်အာရုံခံစားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်သောအုပ်ချုပ်မှုပြုသည့်ဆေးဝါးသည် ဦး နှောက်ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောနည်းလမ်းများဖြင့်ပြောင်းလဲစေခြင်း (ဥပမာ Pierce et al ။ ၁၉၉၆) ။ စမ်းသပ်ဆေးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဆေးများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအာရုံခံစားမှုသည်ပင်လျှင်ပြန်လည်ထူထောင်ရန်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည့် 'ဆေးဖျက်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု' (မူးယစ်ဆေးဝါးကင်းစင်စွာရှောင်ကြဉ်သည့်ကာလအတွင်းတွင်ပေါလ်ဆင်နှင့်ရော်ဘင်ဆင်၊ ၁၉၉၅) ကိုပင်ပြသသည် (Grimm et al ။ 2006)၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှုန်းမြင့်တက်မှုကိုအရှိန်မြှင့် (Ferrario & Robinson 1996) ။ စိတ်ကျေနပ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အခြေအနေများအောက်တွင်စမ်းသပ်စီမံထားသောဆေးများသည်စွဲလမ်းမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောအမူအကျင့်၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ် neurobiological ရလဒ်များထုတ်လုပ်ရာတွင်ထိရောက်မှုရှိရုံသာမကမအောင်မြင်သည့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများထက်ပိုမိုထိရောက်နိုင်သည်။ ကြံ့ခိုင် sensitization ထုတ်လုပ်ရန်။
၎င်းအတွက်အကြောင်းပြချက်များစွာရှိကောင်းရှိနိုင်သည်၊ သို့သော်တစ်ခုမှာ ဦး နှောက်အတွင်းရှိသိမ်မွေ့သောအာရုံစူးစိုက်မှုဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကိုထုတ်လုပ်ရာတွင်အချို့သောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည်အထူးသဖြင့်ထိရောက်မှုမရှိကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောအချက်များသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည် ဦး နှောက်တွင်အာရုံခံစားမှုနှင့်ဆိုင်သောအပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ ၎င်းတွင်ထိုးခြင်း၊ ထိတွေ့မှုအရေအတွက်၊ ထိတွေ့မှုပုံစံ (ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းမှု)၊ မူးယစ်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုနှုန်း၊ စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ချက်ချင်းလက်ငင်းသောက်ပါ - အချိန်နှင့်တပြေးညီနီးကပ်စွာထိုးသွင်းထားသောထိုးဆေးများသည် sensitization ကိုထုတ်လုပ်ရာတွင်ထိရောက်မှုနည်းသည် (Post 1980; Robinson & Becker 1986) ။ ၎င်းသည်အနည်းငယ်မျှသာနှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်သောကန့်သတ်ထားသည့်ကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်နိုင်သည် - ၎င်းသည်စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်နေစဉ်စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်နေစဉ်ကာလတစ်လျှောက်တွင်ကိုကင်းပမာဏကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးပွားစေသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ တစ်နေ့လျှင် ၆ နာရီတိုးချဲ့သုံးစွဲနိုင်မှုသည်လည်းပလာစမာဆေးရည်ကိုအမြဲတမ်းရရှိစေနိုင်သည်။ သို့သော်ဤအခြေအနေတွင်စားသုံးမှုများမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်သုံးစွဲသောမူးယစ်ဆေးဝါးအမြောက်အမြားသည်အခြားမဟုတ်သောအာရုံခံစားမှုကိုကန့်သတ်နိုင်သည့်အခြားအချက်များကိုလွှမ်းမိုးနိုင်သည်။ စမ်းသပ်စီမံခန့်ခွဲမှုအနေဖြင့်၎င်းကိုကန့်သတ်သောအချက်များကိုကျော်လွှားနိုင်သောကုသမှု (Robinson & Becker 6) နှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့ကိုတားဆီးနိုင်သည်။ အမှန်မှာ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုသည်အလွန်နည်းပါးပြီးပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြစ်သည့်အခါစွဲလမ်းမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်အခြေအနေကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်သည်။
7 ။ Like နှိုင်းယှဉ်လိုသော: စွဲ IN ကိုထိခိုက်လုပ်ငန်းစဉ်၏အခန်းကဏ္ဍဆိုတာဘာလဲ?
များသောအားဖြင့်စွဲစေနိုင်သောမူးယစ်ဆေးဝါးများသည်အစပိုင်းတွင်စိတ်ကျေနပ်မှု (ပျော်ရွှင်မှု) ခံစားစေပြီးသုံးစွဲသူများကိုမူးယစ်ဆေးဝါးများထပ်မံယူရန်အားပေးသည်။ သို့သော်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုကူးပြောင်းသည့်အခါမူးယစ်ဆေးဝါးအပျော်အပါး၏အခန်းကဏ္aကိုလျော့နည်းလာပုံရသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးများကို 'ကြိုက်နှစ်သက်မှု' နည်းလာလျှင်ပင်ပိုမိုလိုချင်လာအောင်မည်သို့လုပ်နိုင်သနည်း။ မက်လုံးပေးအာရုံခံစားမှုသီအိုရီအရဤဝိရောဓိဖြစ်ရသည့်အကြောင်းအရင်းမှာထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုသည်စိတ်အားတက်ကြွစေသည့်ဖြစ်စဉ်ကိုဖြန်ဖြေပေးသည့်အာရုံကြောစနစ်များကိုသာအာရုံခံစေသည်။ ထို့ကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုမည်သည့်အတိုင်းအတာအထိလိုချင်သည်ဆိုသည့်အတိုင်းအတာသည်သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အတိုင်းအတာအထိအချိုးမညီစွာတိုးပွားလာသည်။ လိုချင်မှုနှင့်အကြိုက်နှစ်သက်မှုအကြားကွာဟမှုသည်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာသည်။ လိုချင်ခြင်းနှင့်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းတို့အကြားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်အချို့သောအာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်အချို့အားထပ်ခါတလဲလဲအသုံးပြုခြင်းဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနည်းသွားနိုင်သည်ဟုထင်မြင်ယူဆစေခြင်းအားဖြင့်အချို့သောအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်များအားကောက်ချက်ချနိုင်သည်။ (Koob & Le Moal 2006, p ။ 445) ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါကငါတို့ဟောကိန်းထုတ်တာနဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်။ အာရုံခံစားမှုကစွဲလမ်းနေသူတွေကိုမူးယစ်ဆေးဝါးတွေပိုလိုချင်စေတယ်ဆိုရင်၊
ဆက်နွယ်သော်လည်းဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်လိုချင်ခြင်းနှင့်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမှခွဲထုတ်ခြင်းသည်စွဲလမ်းမှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်းအားဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရပ်တန့်ခြင်းနှင့်မကြာခဏရက်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသောဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေသည့် dysphoria ကြောင့်သာစွဲလမ်းမှုကိုထိန်းချုပ်သည်။ ထုတ်ယူသည့်ပြည်နယ်များသည်၎င်းတို့ကြာရှည်စွာမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုကောင်းစွာအထောက်အကူပြုနိုင်သည် (Koob & Le Moal 2006) ။ သို့သော်ဆေးစွဲမှုသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကြာရှည်နေပြီး၊ ဆေးထိုးခြင်းပြီးဆုံးပြီးနောက်ကြာမြင့်စွာဆက်ရှိနေနိုင်သည့် ဦး နှောက်အတွင်းရှိအာရုံခံမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအပြောင်းအလဲများသည်ဆေးစွဲသူများသည်အဘယ့်ကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုဆက်လက်လိုချင်နေကြသနည်း၊ နှစ်ရှည်လများသောက်ခြင်းဖြင့်တောင်မှဆိုးဆိုးရွားရွားအကျိုးသက်ရောက်သည့်ပြည်နယ်မရှိသည့်တိုင်အောင်ပင်ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုရှင်းပြရန်ယန္တရားတစ်ခုဖြစ်သည်။
8 ။ နိဂုံး
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်စွဲလမ်းမှုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောအပြောင်းအလဲများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသော ဦး နှောက်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်စေပြီး၊ မူးယစ်ဆေးထိုးခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုရယူရန်စိတ်စွဲလမ်းမှုအားနည်းခြင်းများသည်သိမြင်မှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်ချို့ယွင်းချက်များနှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါစွဲလမ်းမှုဖြစ်ပေါ်စေသောအဓိကပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်လာသည်။ အလားအလာဆိုးဝါးသောပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုအတွက် (Robinson & Berridge 2003, စစ။ ၄၄-၄၆) ။ ထို့ကြောင့်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းစုဆောင်းထားသည့်သက်သေအထောက်အထားများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့က 'နှလုံးသားတွင်စွဲလမ်းမှုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအာရုံကြောဆိုင်ရာအာရုံကြောဆိုင်ရာအာရုံကြောဆိုင်ရာအာရုံကြောဆိုင်ရာအာရုံကြောဆိုင်ရာအာရုံကြောဆိုင်ရာအာရုံကြောဆိုင်ရာအာရုံကြောစနစ်အားအာရုံကြောဆိုင်ရာအထူးပြုလှုံ့ဆော်မှုများကြောင့်ထူးခြားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံကြောစနစ်များကိုအာရုံစူးစိုက်စေသည့်ရောဂါဖြစ်သည်ဟုကောက်ချက်ချရန်ယုံကြည်မှုရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဦး နှောက်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောတုံ့ပြန်မှုအဖြစ်မူးယစ်ဆေးဝါးများမှအစပျိုးနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောလေ့လာသင်ယူမှုပြaနာမဟုတ်ပါ။ ၎င်းတည်ရှိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်အလိုအလျှောက်လိုချင်ခြင်းသည်စွဲလမ်းသူတစ် ဦး လုံးတွင်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများရှိမရှိ၊ ထို့အပြင်မက်လုံးမက်မောမှုသည်ပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့်နှစ်သက်ခြင်းဖြစ်စဉ်များနှင့်ကွဲပြားသောကြောင့် sensitization သည်၎င်း၏ဘ ၀ ကိုထာဝရတည်မြဲစေလိုသည့်တက်ကြွသောမူးယစ်ဆေးဝါးကိုပေးသည်။ (Robinson & Berridge 44) ။
စာရေးသူအားဖြင့်သုတေသနမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု (USA) ရက်နေ့တွင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျုကနေထောက်ပံ့ငွေကထောက်ခံခဲ့သည်။
တစ်ဆွေးနွေးချက်အစည်းအဝေး Issue မှ 17 တစ်ခုမှာအလှူငွေ '' စွဲလမ်း၏ neurobiology: သစ်ကို Vista '' ။
Ahmed က SH, psychomotor အကဲဆတ်ခြင်း Cador အမ် Dissociation compulsive ကိုကင်းသုံးစွဲမှုကနေ•။ Neuropschopharmacology ။ 2006; 31: 563-571 ။ Doi: 10.1038 / sj.npp.1300834
• Ahmed က SH, အလယ်အလတ်ကနေအလွန်အကျွံမူးယစ်စားသုံးမှုမှ Koob gf ေူပာင်းလဲရေး: hedonic set ကိုအမှတ်အတွက်ပြောင်းလဲမှု။ သိပ္ပံ။ 1998; 282: 298-300 ။ Doi: 10.1126 / science.282.5387.298 [PubMed]
Ahmed က SH, Walker က JR, မူးယစ်ဆေးတင်းမာမှုများ၏သမိုင်းနှင့်အတူကြွက်များတွင်ဘိန်းဖြူယူဖို့လှုံ့ဆျောမှုအတွက် Koob gf Persistent တိုး•။ Neuropschopharmacology ။ 2000; 22: 413-421 ။ Doi: 10.1016 / S0893-133X (99) 00133-5
• Ahmed က SH, Lutjens R ကို, ဗန် der Stap ld, Lekic: D, Romano-Spica V ကို, Morales က M, Koob gf, Repunte-Canonigo V ကို, ကိုကင်းစွဲအတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic circuitry ၏ပြုပြင်ဘို့ Sanna PP Gene စကားရပ်သက်သေအထောက်အထား။ proc ။ Natl Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ။ 2005; 102: 11 533-11 538 ။ Doi: 10.1073 / pnas.0504438102
• Anagnostaras စင်ကာပူဒေါ်လာ, ရော်ဘင်ဆင် TE အသိမြှစိတ်ကြွဆေး၏ psychomotor လှုံ့ဆော်သက်ရောက်မှုမှ: ဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှုအားဖြင့်မော်ဂျူ။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 1996; 110: 1397-1414 ။ Doi: 10.1037 / 0735-7044.110.6.1397 [PubMed]
• Anagnostaras စင်ကာပူဒေါ်လာ, Schallert T က, စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် psychomotor ာင်းအုပ်ချုပ်ရော်ဘင်ဆင် TE မှတ်ဉာဏ်ဖြစ်စဉ်ကို။ Neuropsychopharmacology ။ 2002; 26: 703-715 ။ Doi: 10.1016 / S0893-133X (01) 00402X [PubMed]
• Bechara တစ်ဦးက, Dolan S က, မင်ဒအေဆုံးဖြတ်ချက်-ချမှတ်ခြင်းနှင့်စွဲ (အပိုင်း II ကို): အနာဂတျအတှကျ myopia သို့မဟုတ် hypersensitivity ဆုချသလော Neuropsychologia ။ 2002; 40: 1690-1705 ။ Doi: 10.1016 / S0028-3932 (02) 00016-7 [PubMed]
•ဘင်-ရက်ရှာဟာအို Ahmed က SH, Koob gf, Ettenberg အေထိန်းချုပ်ထားရာမှ compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှအကူးအပြောင်းအကဲဆတ်ခြင်းတစ်ဦးဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 2004; 995: 46-54 ။ Doi: 10.1016 / j.brainres.2003.09.053 [PubMed]
• Berke JD, Hyman အရှေ့တောင်စွဲ, dopamine နှင့်မှတ်ဉာဏ်၏မော်လီကျူးယန္တရားများ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2000; 25: 515-532 ။ Doi: 10.1016 / S0896-6273 (00) 81056-9 [PubMed]
• Berridge, KC 2001 ဆုကြေးသင်ယူမှု: အားဖြည့်, မက်လုံးများနှင့်မျှော်လင့်ချက်များ။ သင်ယူမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏စိတ်ပညာခုနှစ်တွင်, vol ။ 40 (ed ။ DL Medin), စစ။ 223-278 ။ နယူးယောက်, NY: ပညာရေးဆိုင်ရာနှိပ်ပါ။
• Boileau ငါ Dagher တစ်ဦးက, Leyton M က, ဂွန် RN, Baker GB ကို, Diksic M က, Benkelfat C. မော်ဒယ်လင်းာင်းလူသားများတွင်စိတ်ကြွဆေးမှ: ကျန်းမာယောက်ျားတစ်ဦး [11C] raclopride / positron ထုတ်လွှတ် tomography လေ့လာမှု။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006; 63: 1386-1395 ။ Doi: 10.1001 / archpsyc.63.12.1386 [PubMed]
• Boileau ငါ Dagher တစ်ဦးက, Leyton M က, Welfeld K ကို Booij L ကို, Diksic M က, Benkelfat C. လူသားတွေအတွက်အေးစက် dopamine လွှတ်ပေးရန်: စိတ်ကြွဆေးနဲ့ positron ထုတ်လွှတ် tomography [11C] raclopride လေ့လာမှု။ ဂျေ neuroscience ။ 2007; 27: 3998-4003 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.4370-06.2007 [PubMed]
• Briand LA က, Flagel SB, Seeman P ကို, ရော်ဘင်ဆင် TE ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး dopamine D2high receptors အတွက်မြဲတိုးထုတ်လုပ်သည်။ EUR Neuropsychopharm ။ 2008; 18: 551-556 ။ Doi: 10.1016 / j.euroneuro.2008.01.002
အိပ်ချ်၊ အက်စီ၊ အိပ်ချ်၊ အမ်နှင့်ရော်ဘင်ဆင်၊ TE 2008 သိမြင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်နှင့် dopamine D2 receptors များထပ်မံတိုးချဲ့သော်လည်းကန့်သတ်ချက်မရှိခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကင်းသုံးစွဲခွင့်။ Neuropsychopharmacology (Doi: 10.1038 / npp.2008.18)
• Calu DJ သမား, Stalnaker က TA, ဖရန့် TM, Singh က T က, Shaham Y ကို, Schoenbaum G. အ Withdrawal ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကနေကြွက်များတွင်လေ့လာသင်ယူ orbitofrontal-မှီခိုပယ်ဖျက်ခံရထဲမှာကြာရှည်လိုငွေပြမှုထုတ်လုပ်သည်။ လေ့လာပါ။ Mem ကို။ 2007; 14: 325-328 ။ Doi: 10.1101 / lm.534807 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
• Cardinal RN, ပါကင်ဂျာခန်းမ J ကို, Everitt BJ Emotion နှင့်လှုံ့ဆော်မှု: အပု amygdala ၏အခန်းကဏ္ဍ, ventral striatum နှင့် prefrontal cortex ။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 2002; 26: 321-352 ။ Doi: 10.1016 / S0149-7634 (02) 00007-6 [PubMed]
• et al Childress AR ။ စိတ်အားထက်သန်မှုမှရှေ့ပွေးနိမိတျ: "မမွငျရသော" မူးယစ်ဆေးများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုအားဖြင့် limbic activation ။ PLoS တစ်ခုမှာ။ 2008; 3: e1506 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0001506 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
• Crombag HC, Mueller H ကို, Browman Ke, Badiani တစ်ဦးက, ရော်ဘင်ဆင် TE သွေးကြောသွင်းစိတ်ကြွဆေးသို့မဟုတ်ကင်းအောက်ပါ psychomotor activation နှစ်ခုအပြုအမူဆောင်ရွက်ချက်များ၏တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်: dose- အရေးကြီးတဲ့-မှီခိုအပြောင်းအလဲများကို။ ပြုမူနေ။ Pharmacol ။ 1999; 10: 205-213 ။ [PubMed]
• Dalia အေဒီ,-Norman MK, Tabet MR, Schlueter KT, Tsibulsky VL, သည်းခံစိတ်၏ induction အားဖြင့်ကြွက်များတွင်ကင်း-သွေးဆောင်အပြုအမူတွေ၏ထိခိုက်မခံတဲ့များ၏-Norman AB ယာယီ amelioration ။ ဦးနှောက် Res ။ 1998; 797: 29-34 ။ Doi: 10.1016 / S0006-8993 (98) 00323-0 [PubMed]
• Deroche-Gamonet V ကို, ဘီးလင်း: D, ကြွက်များတွင်စွဲတူသောအပြုအမူများအတွက် Piazza PV အထောက်အထား။ သိပ္ပံ။ 2004; 305: 1014-1017 ။ Doi: 10.1126 / science.1099020 [PubMed]
• De Vries တီဂျေ, Schoffelmeer AN, Binnekade R ကို, Raaso H ကို, Vanderschuren LJ Relapse cocaine- နှင့် dopamine D2 receptors ကကမကထပြုခဲ့ဘိန်းဖြူ-ရှာကြံအပြုအမူဖို့အချိန်-မှီခိုနှင့်အမူအကျင့်ာင်းနှင့်ဆက်စပ်သည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2002; 26: 18-26 ။ Doi: 10.1016 / S0893-133X (01) 00293-7 [PubMed]
• Di Ciano P. စည်းရုံးရေးမှူးများဝယ်ယူပေမယ့်ကိုကင်းနှင့်အတူာင်းအောက်ပါတစ်ဦးကိုကင်း-တွဲ conditional စစ်ကူများအတွက်တုံ့ပြန်မဇွဲ။ Neuropsychopharmacology ။ 2007; 33: 1426-1431 ။ Doi: 10.1038 / sj.npp.1301542 [PubMed]
• Duvauchelle CL, Ikegami တစ်ဦးက, Asami က S, Robens J ကို, Kressin K ကိုကိုကင်းအခြေအနေတွင်၏ Castaneda အီးအကျိုးသက်ရောက်မှုထပ်ခါတလဲလဲသွေးကြောသွင်းကင်းအုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက် NACC dopamine နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအပေါ်။ ဦးနှောက် Res ။ 2000; 862: 49-58 ။ Doi: 10.1016 / S0006-8993 (00) 02091-6 [PubMed]
• Edwards က S နဲ့, Whisler KN, Fuller, DC, Orsulak PJ, နာတာရှည်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါ D1 နှင့် D2 dopamine အဲဒီ receptor အပြုအမူတုံ့ပြန်မှုအတွက်ကိုယ်ပိုင် DW စွဲ-related ပွောငျးလဲ။ Neuropsychopharmacology ။ 2007; 32: 354-366 ။ Doi: 10.1038 / sj.npp.1301062 [PubMed]
•အီဗန် AH, ဖြစ်လာပါသည် N ကို, လောရင့်အေဒီ, Tai YF, အယူခံ S က, Doder M က, Brooks DJ သမား, Lees AJ, ထိခိုက် ventral striatal dopamine ဂီယာဆက်စပ် Piccini P. compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု။ အမ်း။ Neurol ။ 2006; 59: 852-858 ။ Doi: 10.1002 / ana.20822 [PubMed]
• Everitt BJ, Dickinson တစ်ဦးက, Robbins TW စွဲလမ်းအပြုအမူများ၏ neuropsychological အခြေခံ။ ဦးနှောက် Res ။ ဗျာ 2001; 36: 129-138 ။ Doi: 10.1016 / S0165-0173 (01) 00088-1 [PubMed]
• Ferrario CR, ရော်ဘင်ဆင် TE ဖက်တမင်းဆေးပြား pretreatment ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပြုအမူများ၏နောက်ဆက်တွဲတင်းမာမှုအရှိန်မြှင့်။ အီးယူအာရ်။ Neuropsychopharmacol ။ 2007; 17: 352-357 ။ Doi: 10.1016 / j.euroneuro.2006.08.005 [PubMed]
• Ferrario CR, Gorny, G, Crombag HS လီ Y ကို, Kolb B, ရော်ဘင်ဆင် TE ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောနှင့်ထိန်းချုပ်ကနေဆိုးရွားလာခဲ့သည်ကိုကင်းသုံးစွဲမှုအကူးအပြောင်းနဲ့ဆက်စပ်အပြုအမူ plasticity ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 58: 751-759 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2005.04.046 [PubMed]
• Fiorino DF, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ Phillips က AG ကနည်းပြများနှင့်မြှင့်တင်ရန် dopamine efflux အထီးကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက် D-စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်အပြုအမူာင်းပြီးနောက်။ ဂျေ neuroscience ။ 1999a; 19: 456-463 ။ [PubMed]
• Fiorino DF, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ Phillips က AG ကနည်းပြဃ-amphetamine- သွေးဆောင်အပြုအမူာင်းအောက်ပါအထီးကြွက်များဖြစ်သည်။ Psychopharmacology ။ 1999b; 142: 200-208 ။ Doi: 10.1007 / s002130050880 [PubMed]
• Flagel SB, ရော်ဘင်ဆင် TE ကြွက်များတွင်ကင်း၏သက်ရောက်မှုကိုသက်ဝင်သည့် psychomotor Quantifying ။ ပြုမူနေ။ Pharmacol ။ 2007; 18: 297-302 ။ Doi: 10.1097 / FBP.0b013e3281f522a4 [PubMed]
• Fontana DJ သမား, Post ကို RM, ကိုကင်းနဲ့ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် mesolimbic dopamine လျတ်အတွက် Pert အေအေးစက်တိုး။ ဦးနှောက် Res ။ 1993; 629: 31-39 ။ Doi: 10.1016 / 0006-8993 (93) 90477-5 [PubMed]
•ဂျော့ချ်အို Mandyam CD ကို, Wee က S, Koob gf ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှတိုးချဲ့ access ကိုကြာရှည် prefrontal Cortex-မှီခိုအလုပ်လုပ်နေမှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းထုတ်လုပ်သည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2007; 33: 2474-2482 ။ Doi: 10.1038 / sj.npp.1301626 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
• Grimm JW, မျှော်လင့်ခြင်း BT, ပညာရှိ RA, Shaham Y. Neuroadaptation ။ ဆုတ်ခွာပြီးနောက်ကင်းတဏှာ၏ပေါက်ဖွား။ သဘာဝ။ 2001; 412: 141-142 ။ Doi: 10.1038 / 35084134 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
• Harmer CJ, D-စိတ်ကြွဆေးနှင့်အတူအထပ်ထပ် pretreatment အောက်ပါ Phillips က GD Enhanced စာစားချင်စိတ်ကိုအေးစက်။ ပြုမူနေ။ Pharmacol ။ 1998; 9: 299-308 ။ Doi: 10.1097 / 00008877-199807000-00001 [PubMed]
• Hasin: D, Hatzenbuehler ML, Keyes K ကို Ogburn အီးပစ္စည်းအသုံးပြုမှုမမှန်: စိတ်ရောဂါအဖြေရှာတဲ့နှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလက်စွဲ, စတုတ္ထစာစောင် (DSM-IV) နှင့်ရောဂါများအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခွဲခြားရေး, ဆယ်ဘို့တဘို့ထုတ်ဝေ (ICD-10) စွဲလမ်းမှု။ 2006; 101 (ပျော့ပျောင်း 1 ။ ): 59-75 ။ Doi: 10.1111 / j.1360-0443.2006.01584.x [PubMed]
• Heyn တစ်ဦးက, Wolffgramm ဂျေတိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်အတွက် D-စိတ်ကြွဆေးမှစွဲလမ်းမှု၏ဖှံ့ဖွိုးတိုး: အရက်နှင့် opiate သကဲ့သို့တူညီသောအခြေခံမူ။ Psychopharmacology ။ 1998; 140: 510-518 ။ Doi: 10.1007 / s002130050796 [PubMed]
• Hyman အရှေ့တောင်စွဲ: သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်တစ်ဦးရောဂါ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 162: 1414-1422 ။ Doi: 10.1176 / appi.ajp.162.8.1414 [PubMed]
• Hyman SE, Malenka RC, စွဲလမ်း၏ Nestler EJ ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောယန္တရားများ: ဆုလာဘ်-related သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Annu ။ ဗျာ neuroscience ။ 2006; 29: 565-598 ။ Doi: 10.1146 / annurev.neuro.29.051605.113009 [PubMed]
• Jentsch JD, တေလာ JR Impulse မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက် frontostriatal ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေရရှိလာတဲ့: ဆုလာဘ်-related လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်အမူအကျင့်များထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Psychopharmacology ။ 1999; 146: 373-390 ။ Doi: 10.1007 / PL00005483 [PubMed]
• Kalivas PW, O'Brien C. မူးယစ်ဆေးဝါးသည်အာရုံကြောဆိုင်ရာအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2008; 33: 166-180 ။ [PubMed]
• Kapur S က, Mizrahi R ကိုလီအမ် dopamine မှစ. salience မှစိတ္တ၏စိတ္တ-ချိတ်ဆက်ဇီဝဗေဒ, ဆေးဝါးဗေဒနှင့် phenomenology ရန်။ Schizophr ။ res ။ 2005; 79: 59-68 ။ Doi: 10.1016 / j.schres.2005.01.003 [PubMed]
• Knackstedt LA က, ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှ Kalivas PW တိုးချဲ့ access ကိုမူးယစ်ဆေး-ရစေတယ် reinstatement သော်လည်းမအပြုအမူာင်းပိုကောင်းစေပါတယ်။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 2007; 322: 1103-1109 ။ Doi: 10.1124 / jpet.107.122861 [PubMed]
• Koob gf, Le Moal အမ်ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; လန်ဒန်, ဗြိတိန်: 2006 ။ စွဲလမ်း၏ Neurobiology ။
•လက်တ BT ထပ်ခါတစ်လဲလဲထိတွေ့မှုစိတ်ကြွဆေး, မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်ကိုကင်းများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုအရှိန်အဟုန်မြင့်ထက်လျော့။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 1989; 98: 357-362 ။ Doi: 10.1007 / BF00451687 [PubMed]
•လူသားများတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ stimulant မှ Leyton အမ်အေးစက်နှင့်ထိခိုက်တုံ့ပြန်မှု။ prog ။ Neuropsychopharmacol ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 31: 1601-1613 ။ Doi: 10.1016 / j.pnpbp.2007.08.027 [PubMed]
•လီ Y ကို, Acerbo MJ, ရော်ဘင်ဆင် TE အပြုအမူအကဲဆတ်ခြင်း induction အဓိကထဲမှာကိုကင်း-သွေးဆောင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity နှင့်ဆက်စပ် (သို့သော် shell မဟုတ်) ကနျူကလိယ accumbens ၏ဖြစ်ပါတယ်။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 2004; 20: 1647-1654 ။ Doi: 10.1111 / j.1460-9568.2004.03612.x [PubMed]
• Mantsch JR, Yuferov V ကို, Mathieu-Kia လေး, ဟိုတစ်ဦးက, Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်အနိမ့်ကိုကင်းဆေးများနှိုင်းယှဉ်မြင့်မားဖို့တိုးချဲ့သုံးစွဲနိုင်၏ Kreek MJ အကျိုးသက်ရောက်မှု, ကိုကင်း-သွေးဆောင် reinstatement နှင့်ဦးနှောက် mRNA အဆင့်ဆင့်ကြွက်၌တည်၏။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 2004; 175: 26-36 ။ Doi: 10.1007 / s00213-004-1778-x [PubMed]
• Martinez: D, et al ။ ကိုကင်းမှီခိုနှင့် striatum ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ subdivisions အတွက် D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု: ကင်း-ရှာအပြုအမူနှင့်အတူဆက်ဆံရေးမျိုး။ Neuropsychopharmacology ။ 2004; 29: 1190-1202 ။ Doi: 10.1038 / sj.npp.1300420 [PubMed]
• Martinez: D, et al ။ ဖက်တမင်းဆေးပြား-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်: သိသိသာသာကင်းမှီခိုနှင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုကင်းဖို့ရှေးခယျြမှု၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များတွင်ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 164: 622-629 ။ Doi: 10.1176 / appi.ajp.164.4.622 [PubMed]
•မိုင် FJ, Everitt BJ, ကြွက်များအားဖြင့်ရှာကြံ Dickinson အေခံတွင်းကိုကင်း: အရေးယူမှုသို့မဟုတ်အလေ့အထ? ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 2003; 117: 927-938 ။ Doi: 10.1037 / 0735-7044.117.5.927 [PubMed]
opiates ၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA ထိုးနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏• Mitchell က JB, Stewart ကဂျေနည်းပြ။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 1990; 35: 643-650 ။ Doi: 10.1016 / 0091-3057 (90) 90302-X ကို [PubMed]
•နယ်လ်ဆင်တစ်ဦးက, Killcross အက်စ်ဖက်တမင်းဆေးပြားထိတွေ့မှုအလေ့အထဖွဲ့စည်းရေးပိုကောင်းစေပါတယ်။ ဂျေ neuroscience ။ 2006; 26: 3805-3812 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.4305-05.2006 [PubMed]
•ရေရှည် plasticity နောက်ခံစွဲ၏ Nestler EJ Molecular အခြေခံ။ နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ 2001; 2: 119-128 ။ Doi: 10.1038 / 35053570 [PubMed]
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် variable တွေကိုနှင့်အတူအပြန်အလှန်: • Nocjar ကို C, Panksepp ဂျေနာတာရှည်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းစိတ်ကြွဆေး pretreatment drug- နှင့်သဘာ-အကျိုးသည်အနာဂတ်အစာစားချင်စိတ်အပြုအမူပိုကောင်းစေပါတယ်။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 2002; 128: 189-203 ။ Doi: 10.1016 / S0166-4328 (01) 00321-7 [PubMed]
• Nordquist RE, Voorn P ကို, က de Mooij-ဗန် Malsen JG, Joosten RN, Pennartz CM, Vanderschuren LJ တိုးပွားစစ်ကူတန်ဖိုးနှင့်အရှိန်အလေ့အထဖွဲ့စည်းရေးအကြိမ်ကြိမ်စိတ်ကြွဆေးကုသမှုပြီးနောက်။ အီးယူအာရ်။ Neuropsychopharmacol ။ 2007; 17: 532-540 ။ Doi: 10.1016 / j.euroneuro.2006.12.005 [PubMed]
• Paterson NE, Markou အေကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းပြီးနောက်ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ကိုကင်းစားသုံးမှုများအတွက်လှုံ့ဆျောမှုတိုးမြှင့်။ Neuroreport ။ 2003; 14: 2229-2232 ။ Doi: 10.1097 / 00001756-200312020-00019 [PubMed]
• Paulson PE, အ dorsal နှင့် ventral striatum အတွက် dopamine neurotransmission ၏ရော်ဘင်ဆင် TE ဖက်တမင်းဆေးပြား-သွေးဆောင်အချိန်-မှီခိုာင်း: ကြွက်ပြုမူအတွက် microdialysis လေ့လာမှု။ synapses ။ 1995; 19: 56-65 ။ Doi: 10.1002 / syn.890190108 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
• Pelloux Y ကို, Everitt BJ, ပြစ်ဒဏ်အောက်မှာကြွက်များကရှာကြံ Dickinson အေ compulsive မူးယစ်ဆေး: မူးယစ်ဆေးယူပြီးသမိုင်း၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 2007; 194: 127-137 ။ Doi: 10.1007 / s00213-007-0805-0 [PubMed]
•ပီယပ် RC, ဘဲလ် K ကို Duffy P ကို, Kalivas PW ထပ်ခါတစ်လဲလဲကင်းနျူကလီးယပ်အတွက် excitatory အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဂီယာသာအပြုအမူာင်းဖွံ့ဖြိုးဘဲလျက်ကြွက်များတွင် accumbens ကြီးထွားများပြားစေ။ ဂျေ neuroscience ။ 1996; 16: 1550-1560 ။ [PubMed]
• Porrino LJ, Smith က HR, Nader, MA, Beveridge တီဂျေကိုကင်းများ၏သက်ရောက်မှု: စွဲ၏သင်တန်းကျော်တစ်ဦးပြောင်းလဲပစ်မှတ်။ prog ။ Neuropsychopharmacol ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 31: 1593-1600 ။ Doi: 10.1016 / j.pnpbp.2007.08.040 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
စဉ်ဆက်မပြတ်ဆွနှိုင်းယှဉ်• Post ကို R. ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း: ာင်းသို့မဟုတ်သည်းခံစိတ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အချိန်ကြားကာလ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဘဝကသိပ္ပံ။ 1980; 26: 1275-1282 ။ Doi: 10.1016 / 0024-3205 (80) 90085-5 [PubMed]
•ကြွက်များတွင်ထပ်တလဲလဲကင်းအုပ်ချုပ်ရေး Post ကို RM, နှင်းဆီအိပ်ချ်တိုးမြှင်ဆိုးကျိုးများ။ သဘာဝ။ 1976; 260: 731-732 ။ Doi: 10.1038 / 260731a0 [PubMed]
•ရော်ဘင်ဆင် TE, Becker က JB နာတာရှည်စိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်ရေးဖြင့်ထုတ်လုပ်ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူအတွက်ကြံ့ကြံ့ခံအပြောင်းအလဲများကို: စိတ်ကြွဆေးစိတ္တ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များတစ်ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်အကဲဖြတ်။ ဦးနှောက် Res ။ ဗျာ 1986; 11: 157-198 ။ Doi: 10.1016 / 0165-0173 (86) 90002-0
•ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏အာရုံကြောအခြေခံ: စွဲတစ်ခုမက်လုံးပေး-sensitive သီအိုရီ။ ဦးနှောက် Res ။ ဗျာ 1993; 18: 247-291 ။ Doi: 10.1016 / 0165-0173 (93) 90013-P ကို ​​[PubMed]
•ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC စွဲ၏စိတ်ပညာနှင့် neurobiology: တစ်ခုမက်လုံးပေး-sensitive အမြင်။ စွဲလမ်း။ 2000; 95 (ပျော့ပျောင်း2။ ): S91-S117 ။ Doi: 10.1080 / 09652140050111681 [PubMed]
•ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC စွဲ။ Annu ။ ဗျာ Psychol ။ 2003; 54: 25-53 ။ Doi: 10.1146 / annurev.psych.54.101601.145237 [PubMed]
•ရော်ဘင်ဆင် TE, Browman Ke, Crombag HS, Badiani အေ Modulation မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးပတျဝနျးကငျြအခွအေနေဖြင့် psychostimulant အကဲဆတ်ခြင်း induction သို့မဟုတ်စကားရပ်၏။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 1998; 22: 347-354 ။ Doi: 10.1016 / S0149-7634 (97) 00020-1 [PubMed]
•ရော်ဂျာ RD, Robbins TW နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုနှင့်အတူဆက်စပ် neurocognitive လိုငွေပြမှုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ Curr ။ Opin ။ Neurobiol ။ 2001; 11: 250-257 ။ Doi: 10.1016 / S0959-4388 (00) 00204-X ကို [PubMed]
et al •ရော်ဂျာ RD ။ နာတာရှည်စိတ်ကြွဆေးချိုးဖောက်မှုများ, opiate ချိုးဖောက်မှုများ, prefrontal cortex မှ focal ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူလူနာနဲ့ tryptophan-ကုန်ခမ်းပုံမှန်စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သိမှတ်ခံစားမှုထဲမှာ Dissociable လိုငွေပြမှု: monoaminergic ယန္တရားများအဘို့သက်သေသာဓက။ Neuropsychopharmacology ။ 1999; 20: 322-339 ။ Doi: 10.1016 / S0893-133X (98) 00091-8 [PubMed]
• Schoenbaum, G, Shaham Y. မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက် orbitofrontal cortex ၏အခန်းကဏ္ဍ: preclinical လေ့လာမှုများ၏သုံးသပ်ချက်။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008; 63: 256-262 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2007.06.003 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
• Seeman P ကို, Tallerico T က, Ko က F, Tenn ကို C, Kapur အက်စ်ဖက်တမင်းဆေးပြား-sensitized တိရိစ္ဆာန်များပင်စူးရှသောစိန်ခေါ်မှုများ၏မရှိခြင်းအတွက် endogenous dopamine ကသိမ်းပိုက် dopamine D2 မြင့်မားသော receptors အတွက်သိသိသာသာတိုးပြသပါ။ synapses ။ 2002; 46: 235-239 ။ Doi: 10.1002 / syn.10139 [PubMed]
• et al Seeman P ကို။ Dopamine supersensitivity စိတ္တဖို့အများကြီးလမ်းကြောင်းခဲ့ရသည်, D2High ပြည်နယ်များနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ proc ။ Natl Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ။ 2005; 102: 3513-3518 ။ Doi: 10.1073 / pnas.0409766102 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
• Seeman P ကို, မက်ကော်မစ် PN, Kapur အက်စ်ဟာ agonist [2H] (+) PHNO ဖြင့်တိုင်းတာ, စိတ်ကြွဆေး-sensitized ကြွက်များတွင် dopamine D3High receptors တိုးမြှင့်။ synapses ။ 2007; 61: 263-267 ။ Doi: 10.1002 / syn.20367 [PubMed]
• Segal DS အပြုအမူနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲဃ-စိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်ရေး neurochemical Correlate ။ Adv ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ Psychopharmacol ။ 1975; 13: 247-262 ။ [PubMed]
• Stewart က J ကို, Vezina P. Extinction လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများစိတ်ကြွဆေးတုံ့ပြန် conditional လှုံ့ဆော်မှုကိုထိန်းချုပ်ဖျက်သိမ်းဒါပေမယ့်အားလပ်ချိန်မှာထိခိုက်။ ပြုမူနေ။ Pharmacol ။ 1991; 2: 65-71 ။ Doi: 10.1097 / 00008877-199102000-00009 [PubMed]
• Strakowski သည် SM, ထပ်ခါတလဲလဲဃ-စိတ်ကြွဆေးစိန်ခေါ်မှုမှ sax KW တိုးတက်ရေးပါတီအပြုအမူတုံ့ပြန်မှု: လူသားတွေအတွက်ာင်းနောက်ထပ်သက်သေသာဓက။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1998; 44: 1171-1177 ။ Doi: 10.1016 / S0006-3223 (97) 00454-X ကို [PubMed]
• Strakowski သည် SM, sax KW, ဆိုသည်အကြောင်း MJ, Keck PE, ထပ်ခါတလဲလဲဃ-စိတ်ကြွဆေးစိန်ခေါ်မှုမှ Jr Enhanced တုံ့ပြန်မှု: လူသားတွေအတွက်အမူအကျင့်ာင်းသက်သေအထောက်အထား။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1996; 40: 872-880 ။ Doi: 10.1016 / 0006-3223 (95) 00497-1 [PubMed]
တေလာ JR, Horger BA ဘွဲ့အချင်းချင်းအပြန်အလှန် accumbens စိတ်ကြွဆေးထုတ်လုပ် conditional အကျိုးသည်တုံ့ပြန် Enhanced •ကင်းာင်းပြီးနောက် potentiated ဖြစ်ပါတယ်။ Psychopharmacology ။ 1999; 142: 31-40 ။ Doi: 10.1007 / s002130050859 [PubMed]
•မူးယစ်ဆေးရမ္မက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲအပြုအမူ၏ Tiffany ST တစ်ဦးကသိမြင်မှုမော်ဒယ်: အလိုအလျှောက်ခြင်းနှင့် nonautomatic ဖြစ်စဉ်များ၏အခန်းကဏ္ဍ။ Psychol ။ ဗျာ 1990; 97: 147-168 ။ Doi: 10.1037 / 0033-295X.97.2.147 [PubMed]
• Tindell AJ, Berridge KC, Zhang က J ကို, Pecina S က, Aldridge JW Ventral pallidal အာရုံခံကုဒ်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှု: mesolimbic ထိခိုက်စေစိတ်ကြွဆေးများကချဲ့ထွင်။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 2005; 22: 2617-2634 ။ [PubMed]
• Ujike H ကို, Akiyama K ကို Otsuki အက်စ် D-2 သော်လည်းမ D-1 dopamine agonists စိတ်ကြွဆေးသို့မဟုတ်ကင်းနှင့်အတူ subchronic ကုသမှုပြီးနောက်ကြွက်များတွင်တိုးပွားအပြုအမူတုံ့ပြန်မှုထုတ်လုပ်ရန်။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 1990; 102: 459-464 ။ Doi: 10.1007 / BF02247125 [PubMed]
• Uslaner JM, Acerbo MJ, ဂျုံးစ်လုပ် SA, ရော်ဘင်ဆင် TE ကင်း၏သွေးကြောသွင်းဆေးထိုးညွှန်းတဲ့စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုမှမက်လုံးပေး salience ၏ကိုတွက်ချက်။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 2006; 169: 320-324 ။ Doi: 10.1016 / j.bbr.2006.02.001 [PubMed]
• Vanderschuren LJ, Everitt BJ မူးယစ်ဆေးရှာအချိန်ကြာမြင့်စွာကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောဖြစ်လာသည်။ သိပ္ပံ။ 2004; 305: 1017-1019 ။ Doi: 10.1126 / science.1098975 [PubMed]
• midbrain dopamine အာရုံခံဆဲလျ reactivity ကိုနှင့် psychomotor လှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေး Vezina P. အသိ။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 2004; 27: 827-839 ။ Doi: 10.1016 / j.neubiorev.2003.11.001 [PubMed]
• et al Volkow ND ။ postsynaptic dopamine receptors အပေါ်နာတာရှည်ကင်းအလွဲသုံးစားမှုဆိုးကျိုးများ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1990; 147: 719-724 ။ [PubMed]
• Volkow ND, ဝမ် GJ, မုဆိုး JS, Logan J ကို, Gatley SJ, Hitzemann R ကို, ချန်အေဒီ, Dewey SL, Pappas N. detoxified ကင်း-မှီခိုဘာသာရပ်များအတွက် striatal dopaminergic တုန့်ပြန်လျော့သွားသည်။ သဘာဝ။ 1997; 386: 830-833 ။ Doi: 10.1038 / 386830a0 [PubMed]
• Volkow ND, မုဆိုး JS, ဝမ် GJ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲလမ်းအတွက် Swanson JM Dopamine: ပုံရိပ်လေ့လာမှုများနှင့်ကုသမှုသက်ရောက်မှုတွေကနေရလဒ်တွေကို။ Mol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2004; 9: 557-569 ။ Doi: 10.1038 / sj.mp.4001507 [PubMed]
•ရပ်ကွက် SJ, မရှိခြင်းကို C, မော်ဂန်: D, ရောဘတ် DC ကပြတ်-စမ်းသပ်မှုတွေဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်ရေးကြွက်များတွင်ကင်း၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများထိခိုက်မခံတဲ့ထုတ်လုပ်သည်။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 2006; 185: 150-159 ။ Doi: 10.1007 / s00213-005-0288-9 [PubMed]
• Wiers RW, Stacy AW, အယ်ဒီတာများ။ သွယ်ဝိုက်သိမှတ်ခံစားမှုနှင့်စွဲလမ်း၏လက်စွဲစာအုပ်။ sage; လန်ဒန်, ဗြိတိန်: 2006 ။
•ပညာရှိ RA, Bozarth MA စွဲ၏တစ်ဦးက psychomotor လှုံ့ဆော်သီအိုရီ။ Psychol ။ ဗျာ 1987; 94: 469-492 ။ Doi: 10.1037 / 0033-295X.94.4.469 [PubMed]
• Wolffgramm J ကို, Heyn အေထိန်းချုပ်ထားမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု မှစ. ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးရန်: ကြွက်များတွင်မူးယစ်ဆေးစွဲ၏နောက်ကြောင်းပြန်မလှည်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 1995; 70: 77-94 ။ Doi: 10.1016 / 0166-4328 (95) 00131-C ကို [PubMed]
• Wyvell CL, ယခင်စိတ်ကြွဆေးထိတွေ့မှုအားဖြင့် Berridge KC ယ့ာင်း: တိုးမြှင့် cue-ဖြစ်ပေါ် sucrose ဆုလာဘ်အတွက် "လို" ။ ဂျေ neuroscience ။ 2001; 21: 7831-7840 ။ [PubMed]